ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ – Yangon Hluttaw
Home / ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သတင်းများ / ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့
Ygn Editor August 21, 2017	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သတင်းများ, အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 141 Comments 1,509 Views
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၇ ရက်
( ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက် )
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကို နံနက်(၁ဝဝဝ)နာရီအချိန်၌ စတင်ကျင်းပပါသည်။ [ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးတင်မောင်ထွန်းမှ ဆောင်ရွက်ပြီး အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် လွှတ်တော်ရုံးအကြီးအမှူး ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေမှ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ]
အခမ်းအနားမှူး ။ ။ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန် အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကျင်းပရန် အချိန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါ၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ နေရာယူပေးကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။
[ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်းသည် ဥက္ကဋ္ဌအတွက် သတ်မှတ် ထားသည့်စင်မြင့်ပေါ်တွင် ြွကရောက်နေရာယူပါသည်။ ]
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာခြင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေးကော်မတီရဲ့တင်ပြချက်အရ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ စုစုပေါင်း (၁၂၃)ဦးရှိပြီး ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကို (၁၁၆)ဦး တက်ရောက်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ စုစုပေါင်း၏ (၉၄.၃၁)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး တက်ရောက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေဟာ အစည်းအဝေးအထမြောက်ရန်လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ သုံးပုံတစ်ပုံ ကျော်လွန်တဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၃၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် နည်းဥပဒေ ၃၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ)အရ အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ အစည်းအဝေးအစီအစဉ် ကြေညာခြင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးရဲ့ ပဉ္စမနေ့ အစီအစဉ်ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ကြိုတင်ဖြနေ့်0xm;ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။
ဦးအောင်နိုင်ထွန်း၊ အဖွဲ့ဝင်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်နိုင်ထွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမမြောက်နေ့ကို မတက်ရောက်နိုင်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၆)ဦးကိုယ်စား ခွင့်ပန်ကြားခွင့်ပြုပါခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ဆေးကုသမှုခံယူရန်ရှိပါသဖြင့် ၃.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ခွင့်(၁)ရက်၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ဦးနိုင်ငံလင်းသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ရှိပါသဖြင့် ၃.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ခွင့် (၁)ရက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မြင့်သည် ဆေးကုသမှု ခံယူရန်ရှိပါသဖြင့် ၃.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ခွင့် (၁)ရက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်သန္တာမိုးသည် ဆေးကုသမှုခံယူရန်ရှိပါသဖြင့် ၃.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ခွင့် (၁)ရက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုးသည် ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် ၃.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ခွင့်(၁)ရက်၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးနေလင်းအောင်သည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ရှိပါသဖြင့် ၃.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ခွင့် (၁)ရက် ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန် လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ ယနေ့ခွင့်ပန်ကြားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၆)ဦးတို့၏ ခွင့်ပန် ကြားချက်များကို ခွင့်ပြုရန် လွှတ်တော်ကသဘောတူပါသလားခင်ဗျား (သဘောတူပါတယ်)။ သဘောတူတဲ့အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ ခွင့်ပန်ကြားချက်များကို လွှတ်တော်က ခွင့်ပြုကြောင်း ကြေညာပါတယ်။ (တူထုသံ)
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ (၁၂၃)ဦး၊ ဒီကနေ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ (၁၁၆)ဦး၊ ယမန်နေ့က ခွင့်ပန်ကြားသူ(၁)ဦးကို ယနေ့ခွင့်ပန်ကြားသူ(၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း ခွင့်ပန်ကြားသူ(၇)ဦးကို လွှတ်တော်က ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိပါ။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ဂ)၊ နည်းဥပဒေခွဲငယ်(၂)အရ ယခုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု အခြေအနေတင်ပြချက်ကို လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ရယူပါမယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုအခြေအနေ တင်ပြချက်ကို အတည်ပြုပါသလားခင်ဗျား (အတည်ပြုပါတယ်)။ အတည်ပြုပါသလားခင်ဗျား (အတည်ပြုပါတယ်)။ အတည်ပြုပါသလားခင်ဗျား (အတည်ပြုပါတယ်)။ လွှတ်တော်က အတည်ပြုတဲ့ အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုအခြေအနေကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်က မှတ်တမ်းတင်ကြောင်း ကြေညာပါတယ်။ (တူထုသံ)
ကြယ်ပွင့်ပြထားသောမေးခွန်းများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ဖြေကြားခြင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း အစီအစဉ် စတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကမေးမြန်းထားသည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများအား တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည်ဖြေကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ အခန်း(၁၁) ပုဒ်မ ၉၄ အရ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပထမတစ်နာရီသည် မေးခွန်းမေးမြန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု မေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်းမှာ တစ်နာရီထက်ကျော်လွန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် မေးခွန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ သဘောတူကြပါသလားခင်ဗျား (သဘောတူပါတယ်)။ သဘောတူကြပါသလားခင်ဗျား (သဘောတူပါတယ်)။ သဘောတူကြပါသလားခင်ဗျား (သဘောတူ ပါတယ်)။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ သဘောတူတဲ့အတွက်ကြောင့် ယနေ့မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်းကို ပြီးဆုံးအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သောဌာနများတွင် အကြီးအကဲကညွှန်ကြားထားသည်ကတစ်မျိုး ပြည်သူလူထူအား ဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံကတစ်မျိုးနှင့် အကျင့်ဆိုးမဖျောက်သေးသောဝန်ထမ်းများအား ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဌေး မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးလှဌေး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။အားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)နယ်မြေမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဌေး ဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဌာနများတွင် ဝန်ထမ်းအချို့သည် အထက်မှပြောသည်ကတစ်မျိုး၊ အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်တွင် ဆောင်ရွက်ကြသည်ကတစ်မျိုး အကျင့်ဆိုးများမပျောက်ဘဲ ရှိနေကြသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။ အချို့ဝန်ထမ်းများသည် ပြည်သူတို့၏အကျိုးကို ပြောင်းလဲလာသည့်စနစ်နှင့်အညီ အားကျိုး မာန်တက်ဆောင်ရွက်လာကြသည်ကို တွေ့မြင်လာရသော်လည်း အကျင့်ဆိုးများ မပျောက် ပျက်သေးသူများ၏ အပြောအဆို၊ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များ၊ မကြန့်ကြာသင့်သော လုပ်ငန်းများအား အချိန်ဆွဲပြီး ကြန့်ကြာအောင်ဆောင်ရွက်နေမှုများကြောင့် ပြည်သူအချို့အခက်အခဲများ ဖြစ်နေရကြောင်းသိရှိနေရပြီး နိုင်ငံတော်၏ လုပ်ငန်းယန္တရားများကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ရသော အခြေအနေတစ်ရပ်အား တင်ပြလိုပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ကော်မတီ(၁ဝ)ရပ် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ကော်မတီများသည် မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သည့်အခါ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြခွင့်ပြုမိန့်ရယူပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ကွင်းဆင်းမည့်မြို့နယ်ထွေ/အုပ် ရုံးများသို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပြီး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များသို့ ရောက်ရှိသည့်အခါ အချို့မြို့နယ်များသည် စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးထားပြီး အချို့မြို့နယ်များသည် လွှတ်တော်ရေးရာကော််မတီရောက်ရှိသွားသည်ကိုပင် မသိဟန်ဆောင်ကာ စမ်းတဝါးဝါးလုပ်နေကြပြီး လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီရောက်ရှိပြီးသည့်အခါမှ ထိုင်စောင့်ခိုင်းပြီး တွေ့ဆုံရမည့်သူများအား ခေါ်ယူပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူမှုရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသည် မြို့နယ်တစ်ခုအား(၂)ကြိမ် ပြန်လည်ကွင်းဆင်းရာ (၂)ကြိမ်စလုံး ထိုကဲ့သို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ်(၂၂) အခန်း(၁) ၂(ဇ) တွင် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အဆင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းသည့်ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့တို့ကိုလည်းကောင်းဆိုသည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။ လွှတ်တော်ကော်မတီများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခန်း(၁၅)၊ ပုဒ်မ ၈၄ တွင်လည်း ပြည်သူကရွေးချယ်ပေးသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိအားရွေးချယ်ပေးသည့် မဲဆန္ဒနယ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့်ပြည့်စုံသော အများက လေးစားထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်အလျောက် သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်၌ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍတို့နှင့်ဆက်နွယ်၍ ပြည်သူများ၏သဘောထားဆန္ဒဖော်ဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများက ဖြစ်စေ၊ အာဏာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စေ အလေးထားတိုင်ပင်အပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ဟု ဖော်ပြထားရှိပါတယ်။ အချို့မြို့နယ်များတွင် ဒေသခံလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကိုပင် အလေးမထားပြုမူခြင်းများကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။ လွှတ်တော်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ တိုင်းအဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့် အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ကြရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ကို သိရှိရပါတယ်။ အချို့သောဌာနများတွင် အကြီးအကဲက ညွှန်ကြားထားသည်ကတစ်မျိုး၊ ဆောင်ရွက်ပြုမူသည်ကတစ်မျိုး၊ အောက်ခြေ အဆင့်တွင် ပြည်သူလူထုအား ဆက်ဆံဆောင်ရွက်သည့် ပုံစံကတစ်မျိုးဖြစ်နေကြပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် အောက်ပါမေးခွန်းအား မေးမြန်းအပ်ပါတယ်။ အချို့သောဌာနများတွင် အကြီးအကဲက ညွှန်ကြားထားသည်ကတစ်မျိုး၊ ပြည်သူလူထုအား ဆက်ဆံဆောင်ရွက်သည့် ပုံစံကတစ်မျိုးနှင့် အကျင့်ဆိုးမဖျောက်သေးသော ဝန်ထမ်းများအား ထိန်းသိမ်းပြုပြင်သွားရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်းအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်က ဖြေကြားပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးကြီးတင်အောင်ထွန်း၊ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ။ ။လေးစား အပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဌေး၏ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုနကကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး ပြောသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနများဆိုတာကို ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာ လူအများနဲ့ ဖွဲ့စည်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး ဒီလူတွေကို သူ့ရဲ့အဆင့်အလိုက် လျော်ညီတဲ့သင်တန်းတွေကို သင်တန်းပို့ချပြီးမှသာလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးတွေကိုပေးအပ်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ လူအများနဲ့ဖွဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယာက်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်ခြင်းဟာ များစွာကွာခြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မွေးရာပါ ဗီဇ၊ အကျင့်စရိုက် အကုန်လုံးသည် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ သင်ကြားပေးပေး၊ ဘယ်လောက်ပဲ ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်လုပ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ အစည်းအဝေး ပွဲတွေလုပ်လုပ်၊ ဘယ်လိုပဲ မှာကြားမှာကြား အောက်မှာတော့ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးပြောသလို ဖြစ်နေတာတွေကတော့ သေချာကောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်။ ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးမှာလည်း သူ့ရဲ့ဌာနအလိုက် စည်းကမ်းတွေ အကုန်လုံးရှိပါတယ်။ သူရဲ့ဌာနအလိုက် ကျင့်ရမယ့် ကျင့်စဉ်တွေ၊ ပြည်သူလူထုအပေါ်ထားရှိရမယ့် သဘောထားတွေ ဒါတွေကလည်း တိကျစွာအားလုံး ပြဌာန်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သာ အဆင်မပြေမှု လေးတွေ ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာကတော့ မြို့နယ်အဆင့်မှာပဲရှိရှိ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ ကတော့ ကိုယ်ရရှိထားတဲ့ ရာထူး၊ ကိုယ်ရရှိထားတဲ့အဆင့်၊ ကိုယ်ရရှိထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ထက်ကျော်ပြီး တော့မှ လောဘကြီးရင်တော့ အဆင်မပြေတာလေးတွေကတော့ ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မှာလည်း ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူအပေါ်မှာ ဖြည့်တွေးပေးဖို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကြံပြုပြောကြား လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဘာပဲကြည့်ကြည့် မျက်မှန်စိမ်းတပ်ပြီးကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အားလုံးသည် အစိမ်းရောင်ပဲမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် သဘာဝအတိုင်း မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်တပ်ထားတဲ့မျက်မှန်ကို ချွတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သဘာဝအတိုင်း မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုနကပြောသလိုပဲ ဝန်ကြီးဌာနတွေက အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ရဲ့ စည်မျဉ်းစည်းအတိုင်း မလိုက်နာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြီးတည့်မတ်ပေးဖို့နဲ့ သည်းခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမရှိဘူး။ စော်ကားတယ်လို့ယူဆတယ် ဆိုရင်တော့ သူ့ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ အထက်ဌာန ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ကို အထောက်အထားများနဲ့ စာနဲ့တိုင်ကြားမယ်ဆိုရင် တိကျစွာဖော်ထုတ်ပြီး စိစစ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သူရဲ့အဆင့် တိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းများပို့ချပေးပြီးတော့မှသာလျှင် အဆင့်မြင့်ရာထူးတွေ ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြစ်ချက်ရှိလို့ရှိရင် တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူးမှာ ထိခိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရန် လိုအပ်သောအခြေခံအချက်အလက်များ စနစ်တကျဖြည့်ဆည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မြလှစံ မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်မြလှစံ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။ ။လေးစားရပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ ယနြွေ့ကရောက်လာကြသော အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျွန်မကတော့ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဒေါ်မြလှစံ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီနေ့မေးမြန်းသွားမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခြေခံအချက်အလက်များ စနစ်တကျဖြည့်ဆည်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဘက်ဘက်ကနေပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့အချိန်နှင့်တပြေးညီဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရာမှာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍဟာလည်း အရေးပါတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပြုလုပ်လျက် ရှိတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ကိုလည်း စွမ်းအားပြည့် ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသည် ကျယ်ပြန့်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အနေနှင့်လည်း အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီ (၁/၂ဝ၁၇) အစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ ှနြ များသည် အဓိကသွေးကြောများအထိ တည်ရှိနေတာကို သိရှိရပါကြောင်း၊ ှနြ များသည် နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ မောင်းနှင်တံများ ဖြစ်သကဲ့သို့ စွန့်ဦးတီထွင်မှုလုပ်ငန်းများလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို လုပ်ငန်းကြီးများထက် ပိုမိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာ တုံ့ပြန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ (၉၉)ရာခိုင်နှုန်းသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ ှနြ များ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်း များအတွက် လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ၊ နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ လိုအပ်သလို ဥပဒေနှင့် အညီ ကူညီဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍဟာ လျှပ်စစ် စွမ်းအားကို အားဖြည့်ထုတ်လုပ်နိုင်မှသာလျှင် ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြေယာ ဈေးနှုန်းတွေ သင့်တင့်မျှတမှုရှိမှလည်း စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေကို တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်။ ကျွန်မကို ဏသတနမ ဏသငညအ ဖြင့် တင်ပြခွင့်ပြုပါရှင်။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တောင်ဒဂုံမှာရှိတဲ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အထည်ချုပ်စက်ရုံက သုံးလိုက်တဲ့ ရေဆိုးတွေကို သုံးစွဲမှုအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အထည်ချုပ်စက်ရုံကနေသုံးရတဲ့ လောင်စာတွေဟာ စက်ရုံဝင်းအတွင်းမှာပဲ ထားရှိသိုလှောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အလွန်အန္တရာယ် လည်းများပါတယ်ရှင်။ ဒါကလည်း သူတို့လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနေတဲ့ အခြေအနေပါ။ မုန့်လုပ်ငန်းမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ထုတ်လုပ်တဲ့ပုံစံက လက်တွေနဲ့ကိုင်တွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု မရှိပါဘူးရှင်။ ဒီဟာဆိုရင် လက်တွေနဲ့ကိုင်တွယ်တဲ့ ပုံစံတွေပါ။ ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း သုံးစွဲတဲ့ နေရာတွေဟာ အရမ်းကြပ်ပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် မီးအန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်ရပါတယ်ရှင်။ ဒီဟာ ကတော့ ဒန်အိုးစက်ရုံပါ။ ဒန်အိုးစက်ရုံမှာ သုံးစွဲနေတဲ့မီးသုံးစွဲမှုဟာ အရမ်းအန္တရာယ်လည်း များပါတယ်ရှင်။ မီးဟာ ရဲရဲတောက်တောက်ကြီးကို ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ ဒါတွေဟာ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်နေတဲ့အနေအထားကို ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ စက်ရုံကနေထုတ်တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလည်း စနစ်တကျကို သုံးစွဲစေချင်တဲ့ စီမံမှုကို လုပ်စေချင် ပါတယ်ရှင်။ ရေဆိုးထုတ်တဲ့စနစ်တွေ ကောင်းမွန်ဖို့ရယ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေဘဲနဲ့ ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးစေရေးအတွက်လည်း စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်ရှင်။ လုပ်သား များရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်ထားစေချင်ပါတယ်။ အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကလည်း အရည်အသွေးမီ၊ စံချိန်စံညွှန်းမီတဲ့ လုပ်ငန်းများအတွက် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့တွေကို ဖွဲ့ပြီးတော့ ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက် ပြီးတော့ ဥပဒေရှိပြီးတော့ နည်းဥပဒေဟာ ယခင်ဥပဒေကို ဗစစူပ လုပ်ပြီးတော့ စီမံနေရတာဖြစ်တဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း တွေ့ရှိနေရပါတယ်ရှင်။ စက်မှုလက်မှု ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အနေနှင့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အဆက်အစပ်မိမိ အပြန်အလှန်၊ တက်ညီလက်ညီဆောင်ရွက်မှသာလျှင် စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လည်း အဲဒီထုတ်ကုန်တွေကို နထစသမအ လုပ်မယ်ဆိုရင် ီကအပ င်္မနန တွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သလို အခွန်သက်သာခွင့်တွေလည်း ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်ရှင်။ နယ်စပ်ကနေပြီးတော့ တရားမဝင် ဝင်လာတဲ့ ကုန်စည်တွေကိုလည်း တားဆီး ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဆိုလို့ရှိရင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေဖြင့် အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအချက်အလက်တွေကို စနစ်တကျဖြည့်ဆည်းပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး။ ။လေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မြလှစံ မေးခွန်းကိုဖြေကြားရာမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးပြောသွားတာတွေဟာ မှန်ကန် ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့နဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်မှုမှာ အသေးစားအလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့က အဓိကအရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံကြီးတွေဆိုတာဟာ စက်ရုံကြီးတစ်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာထက် ဒီအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေဟာ ပြည်သူလူထုများကို လုပ်ငန်းများပေးအပ်နိုင်မယ်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖြစ်ထွန်းစေမယ်၊ စီးပွားရေးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အဓိကအလေးပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကို ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ရေးအတွက်ကို ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက င်္မညေခ့ငျန ကုမ္ပဏီများ၊ ပုဂ္ဂလိကဓါတ်အားပေးလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ နိုင်ငံတော်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိုလည်း စက်မှုဇုန်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ၊ လုံလုံ လောက်လောက် ရရှိနိုင်ရေးအတွက်ကို ျြေအနမ ဏူညေ ရေးဆွဲပြီးတော့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ မြေယာနဲ့ပတ်သက်လို့ မြေယာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ ကျွန်မတို့ကို နိုင်ငံခြားမှ ှနြ သြအနျ ဆိုသော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုယ်တိုင် လာရောက်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ ဒီအတွက် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များရော၊ နိုင်ငံခြားမှ အသေးစားအလတ်စား ှနြ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ အတွက်ပါ အဆင်ပြေစေရေးအတွက် ှနြ လုပ်ငန်းများအတွက် မြေနေရာကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ရရှိရေးအတွက်ကိုလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ စက်မှုဇုန်များ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရေး၊ ရေဆိုးစွန့်ပစ်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ရေသန့်ရရှိရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကို ကျွန်မတို့အနေနဲ့ စနစ်တကျ စီစဉ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စက်မှုဇုန်များကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတစ်ရပ်ကို ကျွန်မတို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ စက်မှုဇုန် ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ ကျွန်မတို့ စက်မှုဇုန်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ တစ်ရပ်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကော်မတီကနေပြီးတော့ စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းတွေကို အဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ထို့အပြင် ှနြ လုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ရေးအတွက် ကျြငညနျျ ြအေခ့ငညါ (ြ အသ ြ) (၄)ကြိမ် ကျင်းပပြီးတော့ လုပ်ငန်းတူ ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မြန်မာ လုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် နည်းပညာမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ွှမငေညငညါ (၃၇)ကြိမ်၊ ျွှသမျု့သစ (၄၄)ကြိမ်၊ ှအေကမိပေ ွှေုူ (၈)ကြိမ်ကျင်းပ၍ နည်းပညာပံ့ပိုးခြင်းနှင့် ှနြ လုပ်ငန်းရှင်များ သိသင့်သိထိုက်သော ုညသတူနါိန များ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့ကိုလည်း ဆက်လက်ပြီးတော့ ွှမငေညငညါ များ၊ ျွှသမျု့သစ များ၊ ွှေုူ များ ကျင်းပပြီးတော့ ှနြ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ုညသတူနါိန များ၊ ဗဟုသုတများ သိသင့် သိထိုက်တာတွေကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ဖြေကြား အပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ အစိုးရဌာနပိုင် ဂိုဒေါင်များ၊ အခန်းများ မြေနေရာများကို ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ငှားရမ်းထားသည်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်လုပ်ငန်းရှင်၊ မည်သည့် ကုမ္ပဏီ၊ မည်သည့်နေရာများကို မည်သည့်ဈေးနှုန်း၊ မည်သည့်အချိန်အထိ ငှားရမ်းထားသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်း မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)။ ။လေးစားရပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရဝန်ကြီးများ၊ ဧည့်သည်တော်များ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများကို မေးမြန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ အစိုးရဌာနပိုင်ဂိုဒေါင်များ၊ အခန်းများ၊ မြေနေရာများကို ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များသို့ ငှားရမ်းထားသည့်ကိစ္စများကို မေးမြန်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဏသတနမ ဏသငညအ ဖြင့် တင်ပြခွင့်ပြုပါရန် လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါတယ်။ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင််ဈေးလမ်း၊ ယခင်အီဒင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၂၅၊ ၂၂၇)တွင် စက်မှု(၁)ဝန်ကြီးဌာနပိုင်ဆိုင်သော ပေ(၁ဝဝ)၊ ပေ(၁၃ဝ)ဂိုဒေါင်အား ှကစနမ ဥညန ီမေါသည ဃသ.ယူအိ သို့ ငှားရမ်းထားသည်ကိုသိရှိရသော်လည်း ယခင်ကစက်မှု(၁) ဆိုင်းဘုတ်၊ နောက်ပိုင်းတွင် ှကစနမ ဥညန ီမေါသည ဃသ.ယူအိ ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်ထားပြီး ယခုအခါဆိုင်းဘုတ်များကို ဖြုတ်ချ ထားသော်လည်း ှကစနမ ဥညန ီမေါသည ဃသ.ယူအိ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အလားတူ စက်မှု(၁)ဝန်ကြီးဌာန ဝင်းသူဇာပိုင် အမှတ်(၂ဝ၁) ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်းရှိ ပေ(၃ဝ) အကျယ် ဂိုဒေါင်၊ အမှတ်(၂၂၊ ၂၄) ၅၆ လမ်းရှိ ပေ(၅ဝ)ဂိုဒေါင်၊ ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း အမှတ်(၁၉၈၊ ၂ဝဝ၊ ၂ဝ၂၊ ၂ဝ၄)ရှိ ပေ(၁ဝဝ)အကျယ် သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာနပိုင် ဂိုဒေါင်များ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်ရှိ ယခင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် အဆောက်အဦနှင့်မြေကွက်လပ် တို့အား ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် ကုမ္ပဏီများသို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ ငှားရမ်းထားသည်ဟု သိရှိ ရပါသည်။ ၎င်းမြေနေရာများသည် ယခုကာလပေါက်ဈေးနှင့် တန်ဖိုးမြင့်မားသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ အလားတူ ကိစ္စများသည် အခြားမြို့နယ်များတွင်လည်း ဖြစ်နေသည်ကို သိရှိရပါသည်။ ၎င်းနေရာများ ငှားရမ်းခသည် အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်တွင် ကာလပေါက်ဈေးအတိုင်း တိတိကျကျ စာရင်းဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် အထက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများအား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းလိုပါသည်။ မေးခွန်း(၁) ၎င်းနေရာများကို မည်သည့်လုပ်ငန်းရှင်၊ မည်သည့်ကုမ္ပဏီများသို့ ငှားရမ်းထားပါသနည်း၊ မေးခွန်း(၂) ငှားရမ်းသည့်နေရာများကို မည်သည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် ငှားရမ်းထားပါသနည်း၊ မေးခွန်း(၃) မည်သည့် အချိန်ကာလအထိ ငှားရမ်းထားသည်ကို ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ ဖြေကြား ပေးပါရန် မေးမြန်းအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများအားလုံး မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်း၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာမှာ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း ယခင် အီဒင်လမ်း အမှတ်(၂၁၅၊ ၂၁၇၊ ၂၁၉)တွင် သိုလှောင်ရုံအမှတ်(၁) (ပေ ၁၂ဝx၂၂ ပေx ၆ လက်မ) နှင့် ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း၊ အမှတ်(၂၃၁)ရှိ သိုလှောင်ရုံအမှတ်(၂) (ပေ ၁၃၇ x ပေ ၁ဝဝ ) ရှိသည့် သိုလှောင်ရုံ(၂)လုံးအား ၂၂.၁ဝ.၂ဝ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၁၅/၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၆)ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ှကစနမ ဥညန ီမေါသည ဃသ.ယူအိ သို့ ၁.၁၁.၂ဝ၁၅ ရက်နေ့မှစတင်၍ ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ သိုလှောင်ရုံ (၂)လုံး၏ (၁)နှစ်ငှားရမ်းခ ကျပ်(၁၅)သန်းဖြစ်ပြီး ငှားရမ်းကာလ(၂၅)နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ (၅)နှစ်(၂)ကြိမ် သက်တမ်းတိုးခွင့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ သိုလှောင်ရုံ(၂)လုံးသည် ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း ယခင်အီဒင် လမ်းနှင့် ၅၆ လမ်းကြားတွင်တည်ရှိပြီး တခြားသိုလှောင်ရုံ မရှိတော့ပါကြောင်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝင်းသူဇာပိုင် အမှတ်(၂ဝ၁) ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်းရှိ ပေ(၃ဝ)အကျယ်ဂိုဒေါင်အား ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သိမ်ဖြူလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းလမ်းထောင့်ရှိ ယခင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနပိုင်အဆောက်အဦ နယ်မြေကွက်လပ်များအား ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် ကုမ္ပဏီများသို့ အပြီးအပိုင်လွှဲပြောင်းရောင်းချပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း၊ အမှတ်(၁၉၈/ ၂ဝဝ/၂ဝ၂/၂ဝ၄)ရှိ ပေ(၁ဝဝ)အကျယ် (၁)ထပ်တိုက် အုတ်တိုက်နံရံသွပ်မိုး အဆောက်အဦအား သံယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ယခင်သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာန သတ္ထုတွင်းဌာန၏ ကတ်သုတ်ကြေးနီ (၁ဝ၁ဝ.၃၂၄) မက်ထရစ်တန် လက်ရှိသိုလှောင်ထားသော ကြေးနီသိုလှောင်ရုံအဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါကြေးနီသိုလှောင်ရုံ အဆောက်အဦအား မည်သည့်လုပ်ငန်းရှင် မည်သည့်ကုမ္ပဏီများကိုမှ ငှားရမ်းထားခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ ဌာနပိုင် ကတ်သုတ် ကြေးနီများကိုသာ သိုလှောင်ထားရှိပါကြောင်းနှင့် သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ ရုံးအဆောက်အဦအဖြစ် တွဲဘက်အသုံးပြုနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း ဖြေကြား အပ်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်ရှင်။
ကွမ်းခြံကုန်း မ.ထ.သ မှ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းမရှိသည့် ယခင်မြို့နယ်မော်တော်ယာဉ် အသင်းပိုင် ဦးပိုင်အမှတ် (ဝ/၄၂)ဧရိယာ ၊ (ဝ.၂၁၆) ဧက၊ ဦးမြတ်ကျော် (ဥက္ကဋ္ဌ/ မြို့နယ် မော်တော်ယာဉ်) အမည်ပေါက်မြေကွက်သည် ဦးမြတ်ကျော်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်ပါက အများပိုင်မြေကို မည်ကဲ့သို့ တစ်ဦးတည်းပိုင်အဖြစ် ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါက အများပိုင်မြေအဖြစ် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ (၂) ရတနာ စက်သုံးဆီဆိုင် အနောက်ဘက်ရှိ မြို့နယ်မော်တော်ယာဉ်အသင်းပိုင်မြေကွက်အား ရတနာ စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်သို့ ရောင်းချထားခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် ရောင်းချခဲ့ပါက အများပိုင် မြေကို အလွဲသုံးစားပြု၍ ရောင်းချခဲ့မှုအား ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ အရေးယူဆောင်ရွက် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် အများပိုင်မြေအဖြစ် ပြန်လည်သိမ်းယူရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မင်းမင်း မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်မင်းမင်း၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။ ။ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဧည့်သည်တော်များအားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော်ကတော့ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မင်းမင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ ကံကြီး/မကျီးရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်မှာ ယခင်က မ.ထ.သ ပိုင်မြေနေရာသည် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်များ စုပေါင်းဝယ်ယူထားသည့်မြေနေရာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျား။ စတင်ဝယ်ယူစဉ်ကပင် မော်တော်ယာဉ်အသင်းပိုင်ဟု ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ထိုမှတဆင့် မ.ထ.သ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာတွင် အသင်းပိုင် မြေနေရာအားလုံးကို လွှဲပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ မြေအချို့ကိုသာအပ်နှံခဲ့ကြောင်းလည်း ကျွန်တော်တို့ သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျား။ ဝယ်ယူထားသော မ.ထ.သ ပိုင်မြေနေရာရဲ့ အကျယ်အဝန်း အလွန် ကျယ်ဝန်းပြီး မ.ထ.သ ရုံးနှင့်ကပ်လျက် ယခင်ရတနာစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် ယခု ဗစနထ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်နောက်ကျောအထိူပုံစံကွက်လပ်ခြံကွက်ကြီးဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းဧရိယာ အကျယ်အဝန်းဟာ (ဝ.၃၆၆)ဧက ရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ ယခုအခါ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မ.ထ.သ အဖွဲ့ဖျက်သိမ်းပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာတွင် မ.ထ.သ ပိုင်မြေနေရာအား ပြန်လည်လွှဲပြောင်းအပ်နှံရာတွင် ယခင် မော်တော်ယာဉ်အသင်းပိုင်မြေနေရာနှင့် မ.ထ.သ ပိုင်မြေနေရာအားလုံး လွှဲပြောင်းအပ်နှံခြင်းမရှိဘဲ မ.ထ.သ ရုံးဆောက်ထားသည့် ပေ(၄ဝ)၊ ပေ(၁ဝဝ) မြေကွက်ပေါ်က အဆောက်အဦကိုသာ အပ်နှံပြီး ၎င်းနှင့်ကပ်လျက် စားသောက်ဆိုင်နှင့် ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင် ငှားရမ်းထားသော ဦးပိုင်အမှတ် ၆ (ဝ/၄၂)၊ ဧရိယာ(ဝ.၂၁၆) ဧရိယာအကျယ်အဝန်းကို လွှဲပြောင်းအပ်နှံခြင်းမရှိဘဲ မော်တော်ယာဉ် အသင်းဥက္ကဋ္ဌအမည်ပေါက်နေကြောင်း ကျွန်တော်တို့ သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျား။ ထို့အပြင် ရတနာ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်နှင့် နောက်ကျောကပ်လျက် မြေကွက်ဧရိယာမှာ (ဝ.၁၅)ရှိပြီး ရတနာ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်အား ရောင်းချထားကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်တော် သိရှိလိုတဲ့မေးခွန်းကတော့ ကွမ်းခြံကုန်း မ.ထ.သ မှ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းမရှိတဲ့ ယခင်မော်တော်ယာဉ် အသင်းပိုင် ဦးပိုင်အမှတ်(ဝ/၄၂)၊ ဧရိယာ (ဝ.၂၁၆)ဧကကို ယခင်မော်တော်ယာဉ်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ အမည်ပေါက်မြေကွက်အား ၎င်းမော်တော်ယာဉ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ အများပိုင်မြေကို မည်ကဲ့သို့တစ်ဦးတည်းပိုင်အဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ရရှိကြောင်းကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းရယူခြင်းဖြစ်ပါက အများပိုင်မြေနေရာအဖြစ် ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ မေးခွန်းနံပါတ်(၂) ရတနာစက်သုံးဆီအနောက်ဘက်ရှိ မြို့နယ်မော်တော်ယာဉ် အသင်းပိုင် မြေဧက(ဝ.၁၅)အား ရတနာစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်သို့ ရောင်းချခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ရောင်းချပါက အများပိုင်မြေကို အလွှဲသုံးစားပြု၍ ရောင်းချခဲ့မှုအား ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း၊ အများပိုင်မြေအဖြစ်ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် လေးစားစွာမေးမြန်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်က ဖြေကြားပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မင်းမင်း၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာမှာ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ကံကြီးမကျည်းရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(င/၄၂)၊ ဧရိယာ(ဝ.၃၆၆)ဧက အကျယ်အဝန်းသည် မြို့နယ်မြေအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင် များမှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစုပေါင်းဝယ်ယူထားတဲ့ မြေဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ဝယ်ယူစဉ်က မြို့နယ်မော်တော်ယာဉ်အသင်းပိုင်အဖြစ် ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူပြီးသည့်အချိိန်တွင် မယကဥက္ကဋ္ဌ၏ ကူညီမှုဖြင့် ပေ(၂ဝ) (၄၂)ပေ၊ (၁၉)ပေ နှစ်ထပ်တိုက်ခံ သွပ်မိုးရုံးအဆောက်အဦနှင့် (၉)ပေပတ်လည် ဈေးဆိုင်ခန်း(၃)ခန်းအား စတင်ဝယ်ယူပြီးနှစ်မှာပင်ဆောက်လုပ်ပြီး အသုံးပြု ခဲ့ပါတယ်။ သက္ကရာဇ် ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်၌ မ.ထ.သ အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အချိန်တွင် ဦးမြတ်ကျော်သည် မ.ထ.သ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်ထပ်ရုံးအဆောက်အဦအပါအဝင် ပေ(၄ဝ) ပေ(၁၁ဝ)ပေ၊ မြေကွက်ဧရိယာ(ဝ.၁ဝ၁)ဧကသာလျှင် ပုံစံ(၁ဝ၅)ခွဲထုတ်၍ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ ဌာနခွဲ(၆) မ.ထ.သ ပိုင်အဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး ကျန်ဧရိယာ(ဝ.၂၆၅) ဧကအား ဦးမြတ်ကျော် (ဥက္ကဋ္ဌ) မြို့နယ်အမည်ပေါက်အဖြစ် ကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့သို့ တောင်ပိုင်းခရိုင် မ.ထ.သ ရုံးပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေပေးခဲ့ပြီးတော့ မြို့နယ်မော်တော်ယာဉ်အသင်းဝင်အားလုံးမှ သဘော တူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဦးမြတ်ကျော်သည် မြေစာရင်းပုံစံ(၁ဝ၅) (၁ဝ၆) ရရှိမှုအပေါ် မြို့နယ် မ.ထ.သအဖွဲ့ဝင်များအား အသိပေးမှုမရှိဘဲ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ယခင်ရတနာစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် ယခု ဗစနထ စက်သုံးဆီဆိုင်ဟု ၄င်းတစ်ဦးတည်း သဘောဖြင့် ရတနာစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် အနောက်ဘက်တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းဖြစ်သော မြို့နယ်မော်တော် ယာဉ်အသင်းပိုင်မြေ (ဝ.၁၅)ဧကအား ကျပ်သိန်း(၃ဝဝ)ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ကြောင်း ၄င်းအား မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးမှ မေးမြန်းမှုအရသိရှိရပါတယ်။ ရတနာစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်သည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပြောင်း ရယူထားသော်လည်း တိုးချဲ့ခြံစည်းရိုးကာကွယ်မှုမရှိသည့်အတွက် မြို့နယ်မော်တော်ယာဉ် အသင်းဝင်များ အနေဖြင့် အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်မှု မည်သည့်အသုံးချမှုမျိုးမဆို ခွင့်ပြုနိုင်ပါကြောင်း အသင်းဝင် များ၏ သဘောတူညီမှုမရှိဘဲ ရောင်းချထားမှုအများမြေကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် အပိုင်စီးရယူထားခြင်းကို သဘောမတူညီနိုင်ပါကြောင်း ဖြေကြားထားပါတယ်။ ဦးမြတ်ကျော်အား မေးမြန်းခဲ့ရာ ၎င်းအနေဖြင့် မြို့နယ် မ.ထ.သ အဖွဲ့ဝင်များအား အသိမပေးဘဲ ရတနာစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် မြေဧရိယာ (ဝ.၁၅)ဧကကို ကျပ်သိန်း(၃ဝဝ)ဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည်မှာ ၄င်းတွင်တာဝန်ရှိပါကြောင်း၊ ကျန်မြေ ဧရိယာ(ဝ.၁၁၅)ဧကအား ကျန်မြို့နယ် မော်တော်ယာဉ်အသင်းဝင်များနည်းတူ အများပြည်သူ အကျိုးငှာ မည်သည့်အသုံးချမှုမျိုးမဆို ခွင့်ပြုပါကြောင်း အဖွဲ့ဝင်များမသိဘဲ မြေရောင်းချမှုအပေါ် ၎င်းတွင်တာဝန်ရှိပါကြောင်း ထိုက်သင့်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုခံယူရန် ပြင်ဆင်ထားပါကြောင်း မေးမြန်းချက်အရ သိရှိရပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြို့နယ်မော်တော်ယာဉ်အသင်းပိုင် မြေဧရိယာ (ဝ.၃၆၆)ဧကအနက် ယခင် မ.ထ.သ ယခု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးထားပြီး (ဝ.၁ဝ၁)ဧက ပယ်လျော့ပြီး (ဝ.၂၆၅)ဧက ကျန်ရှိ နေရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဦးမြတ်ကျော်မှ ကိုယ်ကျိုးအတွက် (ဝ.၁၅ဝ)ဧကအား အများ သဘောတူညီမှုမရှိဘဲ အလွဲသုံးစားပြုခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်သည့်အတွက် ဦးမြတ်ကျော်အနေဖြင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဖြင့် မြို့နယ်မော်တော်ယာဉ်အသင်းဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံကာ မြို့နယ်အသင်းပိုင် (ဝ.၂၆၅)ဧကအား အများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်ရေး ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရန်၊ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးခြင်းမပြုနိုင်ပါက တရားစွဲဆိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြို့နယ်မော်တော်ယာဉ် အသင်းဝင်များ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော အသုံးပြုမှုများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်ရှင်။
ဦးအောင်မင်းမင်း၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။ ။ ဆက်စပ်မေးခွန်း မေးမြန်းခွင့်ပြုပါခင်ဗျား။ ဝန်ကြီးခင်ဗျား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မှာ မော်တော်ယာဉ်အသင်းအနေနဲ့ မော်တော်ယာဉ်လိုင်းလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်း များတဲ့ အခါကြတော့ ထားစရာမြေကွက်လပ်အတွက် မြေဧရိယာ ကျွန်တော်တို့မှာ မရှိပါဘူး။ အရင်တုန်းက လည်း အဲဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ မော်တော်ယာဉ်တွေထားဖို့အတွက် မြေကွက်လပ်ကို ကျယ်ကျယ် ဝယ်ထားခဲ့တဲ့ မြေနေရာအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းူကွေးပုံစံမြေဧရိယာမှာ (ဝ.၃၆၆)ဧရိယာ ကျယ်ဝန်းတယ်။ ၎င်းအဆောက်အဦဟာ အရင်တုန်းကဆောက်ထားခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦ ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ပေါင်း(၂ဝ)နီးပါးလောက်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဟောင်းနွမ်းနေပါပြီ။ နောက်ပြီးတော့ အန္တရာယ်လည်းရှိတဲ့ အဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ ယာဉ်ထားရန်နေရာအတွက် ဒီအဆောက်အဦကို ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ ကားဝင်းအနေဖြင့် ကျွန်တော် ဆောက်လုပ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ နောက်ပြီးတော့ ရုံးခန်းအနေနဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့ အဆင့်မီ ခရီးသည်နားနေဆောင်လည်း ဆောက်လုပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကို မေးမြန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားရပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင့်။ ဆက်စပ်မေးခွန်းဖြေကြားရာမှာ ကျွန်မအနေနဲ့ မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့က ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မှ မော်တော်ယာဉ်အသင်းများနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ် ကတည်းက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတို့ကို ကျွန်မအနေနဲ့ ဒီမြေပေါ်မှာဘဲ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြေကွက်ကို ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အဆောက်အဦတွေကိုလည်း နေရာတကျပြန်လည် ဆောက်လုပ်ပါမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီကားဝင်းကိုလည်း မော်တော်ယာဉ်အသင်းမှကားများ ရပ်နားရန် စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့ ကျွန်မပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်ရှင်။
ဆိပ်ကြီး-ဝါးတန်း ဇက်ပြေးဆွဲမှုကို နံနက်အလုပ်သွားချိန်နှင့် ညနေအလုပ်ပြန်ချိန်များတွင် ယခင်အတိုင်းပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ ပြေးဆွဲမည်ဆိုပါက မည်သည့် အချိန်တွင် ပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးမည်၊ အစီအစဉ်မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းဆွေ မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းဆွေ၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။ ။ အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ရိုသေလေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ကျွန်တော့်မဲဆန္ဒနယ်မြေဖြစ်တဲ့ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်ရှိ မိဘပြည်သူများဟာ ရေလမ်းခရီးကိုသာ အားထားသွားလာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်အလုပ်သွားချိန်နှင့် အလုပ်ပြန်ချိန်ဝန်ထမ်းများ ရုံးတက်/ရုံးဆင်းအချိန်မှာ ဆိပ်ကြီးနဲ့ဝါးတန်းဆိပ်ကမ်းကို ဇက်သင်္ဘောပြေးဆွဲပေးခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြေးဆွဲပေးခဲ့ခြင်း အလျဉ်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်တွင် မော်တော်ကားအစီးရေမှာလည်း တိုးတက်များပြားလျက်ရှိပြီး ထိုမော်တော်ကားများဟာ ရန်ကုန်မြို့တွင် နေ့စဉ်မောင်းနှင်သွားလာလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုမော်တော်ကားများနေ့စဉ်သွားလာရာမှာ လှိုင်သာယာ-တွံတေးလမ်းမှပတ်ပြီးတော့ သွားလာနေရတဲ့အတွက် များစွာအခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ထို့ကြောင့် ဇက်ဖြင့်မော်တော်ကားများအား တင်ဆောင်ရမည်ဆိုပါက အဆင်ပြေချောမွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် ကျွန်တော်မေးမြန်းလိုတာက မေးခွန်း(၁) ဆိပ်ကြီး-ဝါးတန်းဇက်ပြေးဆွဲမှုကို နံနက်အလုပ်သွားချိန်နှင့် ညနေအလုပ်ပြန်ချိန်များတွင် ယခင်အတိုင်း ပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် မေးခွန်း(၂) ဇက်ပြေးဆွဲပေးရန် အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်ကာလတွင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိလိုပါတယ်။ မေးခွန်း(၃) ဇက်ပြေးဆွဲ ပေးရန် အစီအစဉ်မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း မေးမြန်းအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းဆွေ၏မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာမှာ ဝါးတန်း-ဆိပ်ကြီး ကူးတို့လမ်းအားပြေးဆွဲခဲ့သည့်ရေယာဉ်မှာ ရေကျွဲဇက် ရေယာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေကျွဲရေယာဉ်၏ တစ်ရက်ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၁၁ဝဝဝဝ)ကျပ်တိတိဖြစ်ပြီး ဝါးတန်း-ဆိပ်ကြီး ကူးတို့လမ်းအတွက် ကုန်ကျစက်ဆီမှာ တစ်ရက်လျှင်(၈.၅)ဂါလံ ကုန်ကျပါသဖြင့် စုစုပေါင်း တစ်ရက်ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၁၃၃၈ဝဝ)ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါးတန်း-ဆိပ်ကြီး ကူးတို့လမ်းတွင် တစ်ရက်လျှင် ခရီးသည်အများဆုံး(၁၇၉)ဦးသာ လိုက်ပါပြီး အနည်းဆုံးခရီးသည်မှာ(၇ဝ)ဦးခန့် လိုက်ပါမှုမှာ ပျမ်းမျှတစ်လလျှင် (၁ဝ)သိန်းခန့်သာပါရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဝါးတန်း-ဆိပ်ကြီး ကူးတို့လမ်းဝင်ငွေမှာ တစ်ရက်လျှင် အများဆုံး (၁၈၂ဝဝ)ကျပ်နှင့် အနည်းဆုံး(၆ဝ၈ဝ)ကျပ်သာ ရရှိပြီး အသုံးစရိတ်မှာ ဝင်ငွေနှင့်များစွာကွာခြားဆုံးရှုံးရသောကြောင့် ဝါးတန်း-ဆိပ်ကြီး ကူးတို့လမ်းကို ၂၄.၁၂.၂ဝ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ပြုန်းတီးမှုမဖြစ်စေရေးအတွက် အရှုံးများသော ခရီးလမ်းများအား ရပ်နားပြီး ဝင်ငွေရရှိမည့် ခရီးလမ်းများကိုသာ ပြေးဆွဲလျက်ရှိပါသောကြောင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးက ဝါးတန်း- ဆိပ်ကြီး ကူးတို့လမ်းအား ပြန်လည်ပြေးဆွဲရန် အစီအစဉ် မရှိပါဘူး။ သို့သော် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ျွှအေနမ ွှထေင ၊ ျွှအေနမ ကျြ များပြေးဆွဲရေးအစီအစဉ်များနှင့်တကွ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအစား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ရေလမ်းပို့ဆောင်ရေး အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း လေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ပြည်သူများသွားလာရေးနှင့် ယာဉ်ကြီး၊ ယာဉ်ငယ်များ သွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန် သင်္ဘောကျင်းတည်ဆောက်ထားသော လမ်းအပိုင်း(အစား) မူလကမ်းနားလမ်းမကြီးနှင့် တစ်ဆက်တည်းဆက်စပ်၍ လမ်းလွှဲဖောက်လုပ်ပေးရန်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင် မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)။ ။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြွကရောက်လာကြသော အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ အားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး အမှတ်(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကျွန်မ ဆွေးနွေးတင်ပြချင်တာကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ အဓိက အချက်အချာဖြစ်တဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်မှာ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမကြီးလို့ခေါ်တဲ့ ကမ်းနားလမ်းမကြီးရှိပါတယ်။ ဒီကမ်းနားလမ်းမကြီးဟာ သာကေတမြို့နယ် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာမှစတင်ပြီးတော့ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၆၇) ရပ်ကွက်ကို ဖြတ်သန်းပြီး သရက်ပင်ချောင်ကျေးရွာအထိ ခရီးဆက်လို့ရတဲ့ အဓိကလမ်းမကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းမကြီးကို အသုံးပြုပြီးနေ့စဉ်ခရီးသွားနေတဲ့ ခရီးသည်တွေ၊ စုပေါင်းယာဉ်ငယ်တွေ၊ ကွန်တင်နာယာဉ်များ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့လမ်းမကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ ဒီလမ်းမကြီးကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး (၆၇)ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ မြနန္ဒာလမ်းမထိပ်ကနေ (၇၅)ရပ်ကွက် ကမ်းနားလမ်း တာပုဇွန်ရေတံခါးထိ စုစုပေါင်း(၁၇၃၃.၉)ပေ အထိကို သင်္ဘောကျင်းဆောက်လုပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတို့မြို့ရဲ့ အဓိကလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမကြီးအား ဖြတ်တောက် ပိတ်ဆို့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအတွက် ဒီလမ်းမကြီးကို အားထားအသုံးပြုခဲ့တဲ့ခရီးသည်တွေနဲ့ ယာဉ်ကြီး၊ ယာဉ်ငယ်တွေဟာ အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲကိုပြေလည်ဖို့ဆိုရင် သင်္ဘောကျင်း တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းပိုင်းအစား မူလဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမကြီးနှင့် တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်မယ့် အစားထိုးလမ်းလွှဲတစ်ခုဖောက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အသုံးပြုသူတွေလည်း အလွန်အဆင်ပြေ စေပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိုလည်း သေချာပေါက်အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများအနေဖြင့် ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမကြီးနှင့် တဆက်တည်းဖြစ်မယ့် လမ်းလွှဲကို ဖောက်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါတယ်။ အကယ်၍ရှိခဲ့ပါက မည်သည့်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ကို သိရှိလိုပါတယ်ရှင်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်က ဖြေကြားပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ မင်္ဂလာပါ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင်၏မေးခွန်းကိုဖြေကြားရာမှာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ အလုံသင်္ဘောကျင်းနှင့် သိမ်ဖြူသင်္ဘောကျင်း တို့ကို ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ မြနန္ဒာလမ်းထိပ်မှ တာပုဇွန်ရေတံခါးအထိ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမကြီး၏ လမ်းပိုင်းသည် အလုံသင်္ဘောကျင်းနှင့် သိမ်ဖြူ သင်္ဘောကျင်း ဧရိယာအတွင်း ပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ မူလဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမကြီးနှင့် ပြန်လည် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် မြနန္ဒာလမ်းမှ တာပုဇွန်ရေတံခါးအထိ သင်္ဘောကျင်းဧရိယာနှင့် မြေတိုင်း ရပ်ကွက် (၇၃)အကြားတွင် ဆက်စပ်လမ်းလွှဲဖောက်လုပ်နိုင်ရန် လမ်းလယ် ပေ(၈ဝ)အကျယ် လျာထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းလွှဲသည် မြေပေါ်တွင် လမ်းလယ်အဖြစ်သာထားရှိပြီး လမ်းဖော်ထုတ်ထားခြင်းမရှိသေးသဖြင့် လမ်းဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၏ အစီအစဉ်နှင့် အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်ရှင်။
ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်ရှိ (၆၇)ရပ်ကွက်မှ (၉၃)ရပ်ကွက်ထိ ပျက်စီးနေသော ကမ်းနားလမ်း(ခ)ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမကြီးအား မည်သည့်အချိန်တွင်ပြုပြင်၍ ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းပေးနိုင်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင် မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)။ ။ကျွန်မကတော့ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဒီနေ့မေးမြန်းလိုတာကတော့ ကျွန်မတို့ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်ရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ ကမ်းနားလမ်းမကြီးလို့ခေါ်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမကြီး အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းမကြီးဟာ ကျွန်မတို့ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၆၇)ရပ်ကွက် နေပြီးတော့ (၉၃)ရပ်ကွက်ကိုဖြတ်ပြီး ကုလားဝဲတံတားမှ သရက်ပင်ချောင်ကျေးရွာအထိ ချိုင့်ဝှမ်းများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပျက်စီးနေပါတယ်။ ယခုလိုနွေရာသီကာလတွင် သွားရေးလာရေး အတွက် အခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်။ မကြာခင်ကျရောက်တော့မယ့် မိုးတွင်းကာလဆိုရင် ဒီလမ်းမကြီးကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြုနေရတဲ့ ခရီးသွားပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသား/သူတွေ ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် အခက်အခဲများစွာ ပိုမိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမှန်တကယ်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေတဲ့ ကျွန်မတို့မြို့ရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကမ်းနားလမ်းမ(ခ) ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်းမကြီးကို တာရှည်ခံကွန်ကရစ်ခင်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် အစီအစဉ်ရှိလျှင် မည်သည့် အချိန်တွင်ခင်းပေးမည်ကို သိရှိလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ မင်္ဂလာပါ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင်၏မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာမှာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်တွင် မြို့ပြင်ပပတ်လမ်း (ဥကအနမ ျွငညါ) အနေဖြင့် ပဲခူးမြစ်ကမ်းတစ်လျှောက် ပဲခူးမြစ်ကမ်းနားလမ်း(ခ) ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမကြီးကို (၂၂)ပေအကျယ် (၈)လက်မထု သံကူကွန်ကရစ်ဖြင့် သာကေတမြို့နယ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ၆၇ ရပ်ကွက်မှ သရက်ပင်ချောင်ကျေးရွာအထိ ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် အတွင်း စက်မှုဇုန်များ၊ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငံပြာရည် စားသောက်ကုန်စုံများ ဃသညအမခေအ င်္မောငညါ (အကျိုးတူစံပြလယ်ယာများ)နှင့် အိမ်ရာစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင် သန်လျင်၊ ကျောက်တန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းများအတွက် ကားကြီး/ကားငယ်များ ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်းမကြီးကို အသုံးပြုသွားလာနေကြသဖြင့် လမ်းမကြီးယိုယွင်းပျက်စီးမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ် နေပါတယ်။ လမ်းမကြီးပြုပြင်ရန်အတွက် ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)စက်မှုဇုန်အပိုင်း(၄)မှ ကျားကြီးချောင်းရေတံခါးအထိ (၄.၄)မိုင် ရှည်သည့်လမ်းပိုင်းကို (၂၂)ပေအကျယ် (၁)ပေထု ဏူညေန ကွန်ကရစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ (၆၇)ရပ်ကွက်မှ (၉၃)ရပ်ကွက် သန်လျင်တံတားအမှတ်(၂) ဒဂုံတံတား၊ ကုလားဝဲတံခါးအထိ လမ်းပိုင်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်ကို ကျွန်မတို့ ၂၈ ရက် ၃ လပိုင်းက ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ စက်မှုဇုန်များ၊ မြေများ၊ အဆောက်အဦများ၊ အိမ်ရာစီမံကိန်းများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ အစီအစဉ်နှင့် ရန်ပုံငွေရရှိရေးကို စီစဉ်ပြီးလျှင် အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖြေကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ လေးစားပါတယ်ရှင်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နိုင်ငံတော်မှ ှနျြ ချေးငွေပေးအပ်ပြီး ှနျြ လုပ်ငန်း အရေအတွက်၊ ချေးငွေပမာဏမည်မျှပေးအပ်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှု ရှိ/မရှိနှင့် ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှတိုးတက်လာသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းနိုင်ဦး မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းနိုင်ဦး၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)။ ။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းနိုင်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီနေ့မေးမြန်းမယ့်မေးခွန်းကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားရပါသော ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်ကြီးကြီးမားမားဟာ အသေးစား အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲ လာပြီးတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဒိန်းမတ် စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံများမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကို ချေးငွေစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလည်း စက်မှုဝန်ကြီး ဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှာ မှတ်ပုံတင်ထား သူများနှင့် မှတ်ပုံမတင်ဘဲနဲ့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ှနျြ လုပ်ငန်းတွေလည်း အမြောက် အများရှိပါတယ်။ တချို့ကလည်း ှနျြ ချေးငွေလိုချင်လို့သာ မှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့ လုပ်ငန်း တွေကို အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တာတွေ မရှိတာတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရ ပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူဦးရေထူထပ်များပြားပြီးတော့ အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့ ကြားမှာ ဈေးကွက်အလားလာကြီးကြီးမားမားပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက်ခံရချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အာဆီယံနိုင်ငံအတွင်း ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခန်းကဏ္ဍပြန်လည်မြှင့်တင်လာနိုင်ဖို့ကို ရန်ကုန်တိုင်းအနေနဲ့က ှနျြ လုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ နည်းပညာအရင်းအနှီးတွေကို တခြား တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တွေထက် ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာရှိတဲ့အတွက် ှနျြ ချေးငွေတွေနဲ့ စနစ်တကျပို့ကုန်သစ်တွေ၊ ထုတ်ကုန်သစ်တွေသာ ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ှနျြ လုပ်ငန်းများ အပြိုင်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတော့ ပြည်သူလူထုအတွက်လည်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေ ရှာဖွေဖန်တီးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်သန်း လာမှုကို ကျွန်တော်တို့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ လေးစားရပါသော ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာ နိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့ အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သလို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကလည်း နိုင်ငံရဲ့ကျောရိုးသဖွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ စီးပွားရေးမျက်နှာစာ၊ နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာနဲ့ နိုင်ငံတကာမှစောင့်ကြည့်ခြင်းခံရတဲ့ မျက်နှာစာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပါသောကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းလိုတာကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ှနျြ ချေးငွေများ ပေးအပ်လုပ်ကိုင်စေခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အနေနဲ့ မေးခွန်းနံပါတ်(၁) ှနျြ လုပ်ငန်းအရေအတွက် မည်မျှကို ချေးငွေပေးအပ်ခဲ့ပါသလဲ၊ မေးခွန်းနံပါတ်(၂) ချေးငွေမည်မျှ ပမာဏကို ပေးအပ်ခဲ့ပါသလဲ၊ မေးခွန်းနံပါတ်(၃) ချေးငွေရယူပြီး လုပ်ကိုင်တဲ့ ှနျြ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မှု ရှိ/မရှိနှင့် ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှတိုးတက်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာကို သိရှိလိုပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် ှနြ (အသေးစား၊ အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ) သတ်မှတ်ထားသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမည်မျှရှိပြီး မည်သည့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများပါဝင်ပါသလဲ၊ အဆိုပါ ှနြ များ တိုးတက်အောင်မြင်ရေး အတွက် နိုင်ငံတော််အစိုးရအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အနေဖြင့်လည်းကောင်း မည်သို့ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းကို သိရှိလို ပါကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ှနြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံများမှ ှနြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကြံÓဏ်များ၊ နည်းပညာအထောက် အပံ့များရယူဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်ရှင်း မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးရန်ရှင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။ အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဲဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာရေးအား အလွန်ပဲအရေးကြီးလှပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးအတွက် အဲဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာ အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေပါတယ်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးကို လေ့လာကြည့်ရာမှာ ှနျြ များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းများစနစ်တကျချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ှနျြ များကို ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးခြင်းအပြင် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်း/ပြည်ပဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း စသည်တို့ကို ထိထိရောက်ရောက်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယခင်ကအထင်ကရ တည်ရှိခဲ့တဲ့ ရိုးရာ ှနျြ လုပ်ငန်းအချို့တို့ဟာ ယခုအခါမှာပျောက်ကွယ်လုနီးပါးအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရတာကို ကြားသိနေရပါတယ်။ တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မြန်မာ့ရိုးရာပုသိမ်ထီးလုပ်ငန်း၊ အိမ်တော်ရာထီးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်ကာယွန်းထည်လုပ်ငန်း အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းအသီးသီးတွေဟာ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရောင်းချနေရာယူခဲ့ရာကနေ တိုးတက်တဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာတွေ မရရှိမှုတွေကြောင့်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ နှင့်အလုပ်သမားအခက်အခဲများကြောင့်လည်းကောင်း၊ အခြားခြားသော ယှဉ်ပြိုင်မှုများကို မယှဉ်ပြိုင် နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း ဈေးကွက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ မရပ်တည်နိုင်တော့တဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းတွေလျော့ချလိုက်ရတာတွေ၊ လုပ်ငန်းတွေ ပိတ်သိမ်းလိုက်ရတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိအာရှကျားလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ အာရှတိုက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကို ပြန်လေ့လာ ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်(၂ဝ)(၃ဝ)ခန့်က အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ှနျြ အဆင့်လေးတွေပဲ ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနိုင်ငံက အစိုးရအဆက်ဆက်အနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ နည်းပညာတွေ ထောက်ပံ့မှုတွေ ဈေးကွက်ရှာဖွေပေးမှုတွေ၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးကူညီပေးကြတဲ့အတွက် ဒီနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီကုမ္ပဏီ တွေဟာ ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖြစ် ရပ်တည်နေကြတာကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ှနျြ လုပ်ငန်းတွေကို အထူးအလေးပေးပြီးတော့ အားပေး ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို မေးချင် ပါတယ်။ မေးခွန်းကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ ှနျြ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းမည်မျှရှိပြီး မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ ပါဝင်ပါသလဲ၊ မေးခွန်း(၂) အဆိုပါ ှနျြ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်မြင်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်လည်းကောင်း မည်သို့ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရှိလိုပါတယ်။ မေးခွန်း(၃)အနေနဲ့ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ှနျြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံများမှ ှနျြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အကြံဥာဏ်များ၊ နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ရယူဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ သိလိုပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမေးမြန်းလိုတာကတော့ လက်ရှိရှိနေကြတဲ့ ှနျြ လုပ်ငန်းလေး တွေက ထွက်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပဈေးကွက်ရရှိရေးအတွက် မည်သို့မည်ပုံ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်နေကြောင်းနှင့် ဆက်လက်ပြီးတော့ မည်သို့တိုးမြှင့်စီမံဆောင်ရွက်သွားမည် ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း သိရှိလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်မှ (၂)ဦးစလုံး၏ အချက်အလက်တွေကို ဖြေကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းနိုင်ဦး၏မေးခွန်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်ရှှင်း၏ မေးခွန်းတို့ကို ဆက်စပ်ဖြေကြားရာမှာ ဦးသန်းနိုင်ဦး၏ မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ ှနျြ လုပ်ငန်း မည်မျှကို ချေးငွေပေးအပ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုနှစ်များအတွင်းမှာ ြှြှီု (ှောူူ ညေိ နြိငကာ ှုညိကျအမငေူ ီနလနူသစာနညအ ြညေု) မှ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်(၃၆)ဦးအား ချေးငွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဃမနိငအ ွကမေညေအနန ှုညျကမညေခန စနစ်ဖြင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မှ ယနေ့အထိ ဃြ ဘဏ်မှ (၁၅)ဦး၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ (၃)ဦးတို့အား ချေးငွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ (၂ ှအနစ ူသညေ) (ှုဲဃဗ) ချေးငွေအနေဖြင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ ဧရာဝတီဘဏ်၊ ဃြ ဘဏ်၊ ြှြှီု ဘဏ်၊ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တို့မှ လုပ်ငန်းရှင် (၉၈)ဦးအား ထုတ်ချေးပေးခဲ့ပါတယ်။ ချေးငွေကျပ်သိန်းပေါင်း (၁ဝ၁၅ဝ)ကို ြှြှီု ဘဏ်မှ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ (ဃွှု) စနစ်ဖြင့် ဃြ ဘဏ်မှ ကျပ် (၂၆၂.၅) သန်းနှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ ကျပ်(၁၄၅)သန်းတို့အား ချေးငွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ (၂ ှအနစ ူသညေ) (ှုဲဃဗ) ချေးငွေအနေဖြင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ ဧရာဝတီဘဏ်၊ ဃြ ဘဏ်၊ ြှြှီု ဘဏ်၊ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ သားများဘဏ်တို့မှ ကျပ်သန်းပေါင်း(၂ဝ၂၈၁.၆၈)သန်းအား ှနျြ လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ချေးငွေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေဟာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ချေးငွေ အဆိုပြုပါ အစီအစဉ် များအတိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့် အောင်မြင်မှုရှိကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး ဦးရန်ရှင်း၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ မှတ်ပုံတင်ထားသော ှနျြ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ (၁၇၅၆)ဦး ရှိပါတယ်။ အသေးစားလုပ်ငန်း (၁၄၇ဝ)ဦးနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်း(၁၈၆)ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း အမျိုးအစားများမှာ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ ကျပ်ငွေ(၂) ဘီလီယံကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှစိစစ်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်(၃၆)ဦးအား ချေးငွေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်၍ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ (၂ ှအနစ ူသညေ) (ှုဲဃဗ) ချေးငွေအနေဖြင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ ဧရာဝတီဘဏ်၊ ဃြ ဘဏ်၊ ြှြှီု ဘဏ်၊ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တို့မှ လုပ်ငန်းရှင်(၉၈)ဦးအား ကျပ်သန်းပေါင်း (၂ဝ၂၈၁.၆၈)သန်းအား ထုတ်ချေးပေးခဲ့ပါတယ်။ ထပ်မံ၍ ဃမနိငအ ွကမေညေအနန ှုညျကမညေခန (ဃွှု)စနစ်ဖြင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ယနေ့အထိ ဃြ ဘဏ်မှ (၁၅)ဦး ကျပ်(၂၆၂.၅)သန်းနှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ (၃)ဦး ကျပ်(၁၄၅)သန်းတို့အား ချေးငွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းများတိုးတက်ရေးအတွက်ကို သံရည် သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများ အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာစေရန် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ အရည်အသွေးပြည့်မီစေရန် ပြည်တွင်း/ပြည်ပဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန်အတွက် င်္သကညိမေပ ညေိ င်္သမါငညါ နည်းပညာပေးအပ်ခြင်းသင်တန်းကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် (၅)ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်မအနေနဲ့ ရှေ့မှာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီး ဒေါ်မြလှစံရဲ့မေးခွန်းကို ဖြေကြားခဲ့သလို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ှနျြ လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက် နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ငန်းတူအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ွှမငေညငညါ များပြုလုပ်ပေးခြင်းကို ျွှသမျု့သစယ ှအေကမိပေ ွှေုူ နှင့် င်္သကညိမေပ ညေိ င်္သမါငညါ နည်းပညာပေးအပ်ခြင်းသင်တန်းတို့ကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်ရှင်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ဇ)ရပ်ကွက်၌ အရေးတကြီး လိုအပ်နေသော သြထ ဃကူလနမအ (၃)ခုကို ပြုလုပ်တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက မည်သည့်အချိန်တွင် တည်ဆောက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်လွင် မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဇော်လွင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။ လေးစား ရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြွကရောက်လာကြသော အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်လွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ကျွန်တော် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ဇ)ရပ်ကွက်အတွင်း အရေးတကြီးလိုအပ်နေသော သြထ ဃကူလနမအ များတည်ဆောက်ပေးခြင်းနှင့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ မေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေးစား ရပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် (ဇ)ရပ်ကွက်တွင် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးကို ရှေးရှုပြီးတော့ အဓိကလမ်းမကြီးများ၌ အကျယ်(၄)ပေ၊ အနက်(၅)ပေရှိသော ကွန်ကရစ်ရေမြောင်းများကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖောက်လုပ် ခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် (ဇ)ရပ်ကွက် ဥဇ္ဇနာ(၃)လမ်းနှင့် (၄)လမ်း အဲဒီလမ်းကြားများမှာ ရေများ လွှမ်းမိုးနေပြီး အချို့နေအိမ်များအတွင်းသို့ ရေဝင်နေသည်ကို ရာသီမရွေးခံစားနေရပါတယ်။ ရေစီးရေလာမကောင်းသောကြောင့် ခြင်များပေါက်ဖွားပြီး ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားမည်ကိုလည်း ပြည်သူများစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဤကဲ့သို့ရေဝပ်နေခြင်း၊ ရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း ဖြစ်ရသည်ကို ရပ်မိရပ်ဖများ၊ တတ်သိပညာရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကွင်းဆင်းလေ့လာ ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ (က) ခေမာသီလမ်းနှင့် ဥဇ္ဇနာ(၃)လမ်း၊ (၄)လမ်း ဆက်စပ်ထိတွေ့နေသည့် လမ်းထိပ်၌ (ခ) သုဓမ္မာလမ်းနှင့် ဥဇ္ဇနာလမ်းမ ထိစပ်နေသော လမ်းထိပ်တွင်လည်းကောင်း (ဂ) သုဓမ္မာလမ်းနှင့် ကိန္ဒရာလမ်းမထိစပ်နေသော လမ်းထိပ်များတွင်လည်းကောင်း အလျား(၃ဝ)ပေ၊ အကျယ်(၄)ပေ၊ အနက်(၄)ပေရှိသော သြထ ဃကူလနမအ တစ်ခုစီလိုအပ်နေကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးမောင်မောင်စိုး၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားအပ်ပါတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျား။ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်လွင်ရဲ့ မေးခွန်းမှာ ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကလည်း ကွင်းဆင်းလေ့လာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဥဇ္ဇနာလမ်းနှင့် သုဓမ္မာလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥဇ္ဇနာလမ်းကို နှစ်ဖက်ချိတ်ထားပါတယ်။ တစ်ဖက်က ခေမာသီနဲ့ ဲသငညအ တစ်ခုထားပြီးတော့ တစ်ဖက်မှာလည်း သုဓမ္မာလမ်းနဲ့ ဲသငညအ ထားပြီးတော့ နောက် သုဓမ္မာလမ်းနှင့်ကိန္ဒရာလမ်းကို ဲသငညအ လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီနေရာတွေကလည်း တကယ်လည်း သြထ ဃကူလနမအ တွေလိုအပ်တဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာ စံပြအဖြစ် လမ်းတွေကိုသွားတဲ့အခါ လမ်းကိုလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းတဲ့နေရာမှာ တင်ပြတာ လောက်နဲ့တင်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် မလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုးရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် လိုအပ်ချက်အရ ျှကေူငအပ ဗျျကမညေခန အရ ဦးတည်ပြီးတော့ လုပ်ပေးနေပါတယ်။ ဒါကလည်း တကယ် လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အလျားပေ(၃ဝ)နဲ့အနက်(၄)ပေရှိတဲ့ သြထ ဃကူလနမအ (၃)ခုကို ဒီနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထဲမှာ သာမန်ရငွေစာရင်း ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်တဲ့အခါကြရင်လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများအနေနဲ့ ျှကေူငအပ ဗျျကမညေခန နဲ့ ျှကေူငအပ ဃသညအမသူ အနေနဲ့ပါ ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့ ကျကျလုပ်ကိုင်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းကိုစစ်ပြီးတော့ တပြေးညီ ကျွန်တော်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ နဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့ လုပ်ငန်းရဲ့ပြီးမြောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေ လုပ်ငန်းရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက် အကုန်လုံးနဲ့ ဆက်စပ်သွားဖို့လည်း ကျွန်တော့်မှာ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒါမှလည်း ျှကေူငအပ ကောင်းကောင်းနဲ့ လမ်းတွေ သြထ ဃကူလနမအ တွေ၊ ရေမြောင်းတွေ၊ ပလက်ဖောင်းတွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ဌ)ရပ်ကွက်ရှိ သဇင်လမ်းမကြီးအား အရှည်(၁၉ဝဝ)ပေ၊ အကျယ်(၂ဝ)ပေ၊ အထူ(၉)လက်မရှိသော ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်လွင်မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဇော်လွင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)။ ။ လေးစား ရပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြွကရောက်လာကြသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (ဌ)ရပ်ကွက် သဇင်လမ်းမကြီးအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းမေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ဌ)ရပ်ကွက်မှာ အရှည်(၁၉ဝဝ)ပေ အကျယ်(၂ဝ)ပေရှိသော သဇင်လမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းလမ်းမကြီးသည် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ ကျောင်းသားထောင်ပေါင်းများစွာ အားထားရသော အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးကိုဖြတ်သော ထွက်ပေါက်ဖြစ်သည့် မဟာဗျူဟာမြောက်သော လမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလမ်းဟာ မိုးတွင်းအခါမှာ လမ်းမကြီးမှာ ရေမြုပ်ပြီး သွားလာရခက်ခဲနေပါတယ်။ ဒါကို ရဟန်းရှင်လူပြည်သူ အပေါင်း ကျောင်းသားလူငယ်အပေါင်း ခံစားနေရသည့်အပြင် အချို့သောလမ်းပိုင်းများမှာလည်း ချိုင့်ခွက်များဖြင့် ပျက်စီးနေတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုကြီး၏ ဆန္ဒအရ အောက်ဖော်ပြပါကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းလိုက်ရပါတယ်။ မေးခွန်း(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (ဌ)ရပ်ကွက်ရှိ သဇင်လမ်းမကြီးအား အရှည်(၁၉ဝဝ)ပေ၊ အကျယ်(၂ဝ)ပေ၊ အထူ(၉)လက်မရှိသော ကွန်ကရစ်လမ်း အဖြစ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ မေးခွန်း(၂) အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့် အချိန်တွင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဦးမောင်မောင်စိုး၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားအပ်ပါတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျား။ သဇင်လမ်းမကြီးဟာ အရှည် အားဖြင့် ပေ(၁၉ဝဝ)နဲ့ အကျယ်ပေ(၂ဝ)၊ အထူအားဖြင့်(၉)လက်မရှိတဲ့ ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဒီနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်ထဲမှာ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေရရှိမှု အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း များသောအားဖြင့် င်္ခေနဘသသု ပေါ်မှာ အထူ(၉)လက်မရှိတဲ့ လမ်းတွေခင်းတဲ့အခါမှာ အထူ(၉)လက်မပဲရှိပြီးတော့ ပလက်ဖောင်းပါမလာဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကားရှောင်တဲ့အခါကျရင် ယာဉ်တွေပိတ်ကြပ် နိုင်ပြီးတော့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာကိုလည်း ကျွန်တော်တွေးမြင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝန်ကြီးချုပ်ဆီ ကျွန်တော် တင်ပြထားပါတယ်။ လမ်းအင်္ဂါရပ်နှင့်အပြည့်အစုံဖြစ်သွားအောင် ပလက်ဖောင်းနဲ့ ရေမြောင်းတွေပါ ထည့်ပေးဖို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုအပိုင်းမှာ ဘယ်ဟာကို ဦးစားပေး လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး ဦးဇော်လွင်အပါအဝင် ဦးစီးပေးပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပါ။ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ ဒီနှစ်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာ ပြန်လည် ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှခင်းသော လမ်းများနှင့် အုတ်ရေမြောင်းများ၊ ပလက်ဖောင်း များအား မည်သည့်စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မည်သို့မည်ပုံ စစ်ဆေးဆောင်ရွက် နေသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း၊ နောင်တွင် မည်ကဲ့သို့စံချိန်စံညွှန်းများကို ကာလတာရှည် မပျက်စီးနိုင်ရန် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ပြောင်းလဲရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ လှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်ထွန်း မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကျော်ကျော်ထွန်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)။ ။လေးစားရပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများအားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ လေးစားရပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေနဲ့ စည်ပင် သာယာကနေပြီးတော့ လမ်းတွေ၊ မြောင်းတွေ၊ ပလက်ဖောင်းတွေ ပြုလုပ်သလိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်း(၁ဝဝဝ)နဲ့လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဦးစီးပြီးတော့ လမ်းတွေ၊ ရေမြောင်းတွေ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်တွေမှာ ရပ်မိရပ်ဖတွေ၊ ပါတီဝင်တွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ထားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဦးစီးပြီးတော့ အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းမီအောင် ချမှတ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင် ပါတယ်။ စည်ပင်သာယာကလုပ်တဲ့ အချို့လမ်းတွေ ခင်းတဲ့အချိန်မှာ ပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။ လမ်းတွေအက်တာတွေ၊ လမ်းတွေအရည်အသွေးမမီတာတွေ ပြည်သူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို တင်ပြတဲ့အတွက် အမြဲသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကွာခြားချက်စံချိန်စံညွှန်းတွေ ကွာခြားတာကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခင်းတဲ့လမ်းတွေဟာ ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်ကနေဖျော်တဲ့ ွမေိန-၃ဝ ဆိုတာနဲ့ ခင်းပါတယ်။ စည်ပင်သာယာကခင်းတာ ကတော့ လမ်းသွယ်တွေမှာ ွမေိန-၂ဝ ပဲခင်းပြီးတော့ လမ်းမကြီးတွေမှာ ွမေိန-၂၅ ခင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အုတ်ရေမြောင်းတွေမှာလည်း စက်အုတ်တွေကိုသာ သုံးစွဲပါတယ်။ သုံးစွဲတဲ့ နေရာမှာလည်း မဆလာဖျော်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း ၁၂၄ အပြည့်စံချိန်စံညွှန်းမီ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘိလပ်မြေသယ်စက်ကြီးများကနေပြီးတော့ သယ်တဲ့အခါမှာလည်း ကြာဆေး ထည့်ထားတာက လမ်းမှာကြာချိန်(၂)နာရီသာ သတ်မှတ်ပါတယ်။ (၂)နာရီထက်ကျော်လွန်ပြီး သုံးစွဲရင် အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းမပြည့်မီဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စည်ပင်သာယာရဲ့ ဖျော်စက်ရုံရှိတာက ဒေါပုံနဲ့ ရွှေပြည်သာမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို လာတဲ့အချိန် လမ်းမှာ ကားတွေကြပ်တည်းတဲ့အတွက် ကြာချိန်ဟာ ဒီထက်ကြာနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုခင်းတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ခုနလိုပြဿနာတွေ ပေါ်ကောင်းပေါ်လာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ လမ်းခင်းရာမှာလည်း အမြင့်(၃)ပေအကွာကနေ ကွန်ကရစ်တွေကို ဖြည်းညင်းစွာ လောင်းချရပါတယ်။ လောင်းချလိုက်တဲ့ မဆလာတွေကို ဠငဘမအေငသည တွေသုံးစွဲတဲ့အခါမှာ ၉ဝ ဒီဂရီ အနေအထားနဲ့ စနစ်တကျသုံးစွဲရပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ မဆလာများကို(၆)လက်မပတ်လည် ဘလောက်တုံးများပြုလုပ်စေပြီးတော့ စနစ်တကျထားပြီးတော့ ခံနိုင်ရည်ကို ခွဲစိတ်စမ်းသပ်ပြီးတော့မှ သုံးစွဲပါတယ်။ ဘာလို့ဒီလိုစမ်းသပ်သုံးစွဲခြင်းတွေ ပြုလုပ်ရတာလည်းဆိုတော့ အများပြည်သူရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေ အလေအလွင့်နည်းနိုင်သမျှ နည်းပြီးတော့ ရေရှည်ခံနိုင်ပြီးတော့ ကြာရှည်ခံတဲ့ လမ်းများဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာငွေ များကိုလည်း ထိန်းသိမ်းရာရောက်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း လမ်းတွေဟာ (၁)နှစ်အတွင်းမှာ ပျက်စီးခြင်း မရှိဘဲနဲ့ (၄)(၅)နှစ် မပျက်မစီးဘဲနဲ့ တာရှည်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝါပွိုင့်ဖြင့် တင်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျား။ ဒါကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေနဲ့ လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါခင်ဗျား။ ယခုလို စနစ်တကျလောင်းချရပါတယ်။ ပလပ်စတစ်တွေအောက်မှာခင်းပြီးတော့ လောင်းရတဲ့ပုံပါ။ အုတ်စီတဲ့ လုပ်ငန်းပုံပါ။ ဒါကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေခင်းထားတဲ့လမ်းပါ။ ဒီလိုစနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဖွဲ့ပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကို ယခုလိုစနစ်တကျ တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းများမှာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရန် လိုက်နာရမည့်အချက်များဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ သေသေချာချာလေး ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ကွန်ကရစ် လမ်းပေါ်က ရွှံ့များကိုပြောင်စင်အောင် ဆေးကြောတာတွေ၊ ၁၂၄ လောင်းခြင်းတွေမှာလည်း ခုနကပြောသလို ကွန်ကရစ်ဟာ ွမေိန-၃ဝ ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံကနေထွက်လာရင် ကြာရှည်ခံဆေးဟာ(၂)နာရီအတွင်းလောင်းရမှာဖြစ်ပြီး မထည့်ထားရင် (၄၅)မိနစ်အတွင်း လောင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေပါဝင်မှုကိုလည်း ကားအားလုံးမှာစစ်ဆေးရန် စမ်းသပ်ပစ္စည်းများကိုလည်း ကြိုတင် စစ်ဆေးဖို့ ဗွ ကုမ္ပဏီကနေပြီး ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ (၆)လက်မ ဘလောက်တုန်းတွေကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းယူရပါတယ်။ ကားများမှာပါဝင်တဲ့ကွန်ကရစ်မှာလည်း အာလူးခြောက်တွေ၊ အုတ်ကျိုးတွေ၊ အမှိုက်တွေမပါအောင် သေချာစစ်ဆေးရပါတယ်။ လမ်းအသေးလေးတွေမှာ ဖျော်စက်တွေနဲ့ လောင်းတဲ့အခါမှာ လိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေမြောင်းတူးတဲ့အခါမှာလည်း မြေပျော့များကိုတူးရင် မြေပြိုမကျအောင်မြေထိန်းနံရံတွေ၊ တုတ်တွေ စနစ်တကျကာရံပြီးမှ လုပ်စေ ပါတယ်။ မြေပြင်ညီဖြစ်အောင်လည်း ညှိပါတယ်။ ကြမ်းခင်းတွေကိုလည် ဆင်ခြေလျှောစောက် လုပ်မှ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် (၆)လက်မကို (၁း၃း၆)ကွန်ကရစ်လောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွေလည်း လုပ်ပါတယ်။ အုတ်စီခြင်းလုပ်ငန်းမှာ စက်အုတ်တွေကိုပဲ အသုံးပြုပါတယ်။ (၁း၃)မဆလာကိုပဲ သုံးပါတယ်။ မဆလာတွေကိုလည်း ဖျော်ပြီး(၄၅)မိနစ်အတွင်းမှာ ကုန်အောင် သုံးပေးရပါတယ်။ မကုန်ဘဲနဲ့ ကျန်နေရင် ျှကေူငအပ တွေကျဆင်းနိုင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အုတ်များကို မခင်းခင်ရေလောင်းရပါတယ်။ အုတ်ကြားမဆလာထည့်တာတွေကိုလည်း သတ်မှတ်ချက်တွေ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အုတ်တွေကို တစ်ခါစီရင် (၃)ပေထက်မမြင့်ပဲ တဖြည်းဖြည်းစီလာရပါတယ်။ နောက် သံဂျာလီတွေကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ အရှည်လိုက်ထည့်ထားမှသာ ရေရှည်အသုံးခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားရပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်တိုင်း တစ်တိုင်းလုံးအတွက် မေးမြန်းခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ခင်းသောလမ်းများနှင့်အုတ်ရေမြောင်းများ၊ ပလက်ဖောင်းများအား မည်သည့်စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ် ချက်များနှင့် မည်သို့မည်ပုံ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိလိုပါကြောင်းနှင့် နောင်တွင်မည်ကဲ့သို့ စံချိန်စံညွှန်းများကို ကာလတာရှည်မပျက်စီးနိုင်ရန် စံချိန်စံညွှန်းပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ သိလိုကြောင်း မေးမြန်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးမောင်မောင်စိုး၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားအပ်ပါတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျား။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးအနေနဲ့ လမ်းခင်းခြင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လမ်းသွယ်တွေကို ကွန်ကရစ်ခင်းလို့ရှိရင် (၆)လက်မထုအတွက် ွ-၂ဝ (၂၉ဝဝ ဈင) ကွန်ကရစ်နဲ့ခင်းပါတယ်။ လမ်းမကြီးအနေနဲ့ ကွန်ကရစ်ခင်းတဲ့အခါကျရင်တော့ (၉)လက်မထုအတွက် ွ-၂၅(၃၆၂၅ ဈင) နဲ့ ခင်းပါတယ်။ ကွန်ကရစ်ရဲ့ အရည်အသွေးစစ်ဆေးဖို့အတွက်လည်း နမူနာဘလောက်တုံးတွေကို စုထားပြီးတော့ သတ်မှတ်ရက်ပြည့်သည့်အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးရပါတယ်။ ဒါလုပ်ရိုး လုပ်စဉ်ပါ။ အုတ်ရေမြောင်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ အုတ်အရည်အသွေးနဲ့သာ ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခါမှာ ကွန်ကရစ်နဲ့ ကတ္တရာကွန်ကရစ်တို့မှာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သုတေသန ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်ထားတဲ့ ငြထ ီနျငါည အတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်း သူရဲ့ သြည နဲ့ ှအညေိမေိ နဲ့ထားတဲ့အခါ ၂ ူညေနယ ၄ ူညေန ဆိုရင် လမ်းသွယ်ဆိုလို့ရှိရင် ွမေိန-၂ဝ နဲ့ထားပါတယ်။ လမ်းမ ၄ ူညေန လောက်ဆိုရင် ွမေိန-၂၅ နဲ့ထားပါတယ်။ ဒါဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးတဲ့ သြည အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ သွားပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဲဒီမှာ ျှကေူငအပ စစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ အခု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ကစပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ျှကေူငအပ ဃသညအမသူ နဲ့သွားပါတယ်။ အဲဒီ ျှကေူငအပ ဃသညအမသူ ကလည်း ကျွန်တော်တို့ စစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ွှ့ငမိ ဏမေအပ ကစစ်တာပါ။ အဲဒီအတွက်ကို ၂ ဏနမခနညအ ဃ့မေါန ကိုပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့် ျှကေူငအပ ဃသညအမသူ နဲ့ ျှကေူငအပ ဗျျကမညေခန နဲ့လည်း စစ်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ဒါဟာ အရည်အသွေးပြည့်မီခြင်း ရှိ/မရှိဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ့ဃီဃ အနေနဲ့ အရည်အသွေးပြည့်မီအောင် စံနှုန်းအတိုင်းဖြစ်/ မဖြစ်ဆိုတာလည်း ွှ့ငမိ ဏမေအပ အပြင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လည်း စစ်ဆေးလို့ ရပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ကနေစပြီးတော့ ့ဃီဃ က လုပ်ငန်းတွေကို အစမ်းသပ်ခံနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်လည်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေနဲ့ ဈေးနှုန်း လျာထားတွက်ချက်ထားတဲ့ စာရင်းများကိုလည်း ကျွန်တော်ပေးပါမယ်။ အဲဒီမှာ ကတ္တရာကွန်ကရစ် ခင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာတွေ၊ ကွန်ကရစ်ခင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ တံတားဆောက်တဲ့ အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ ပေတွက်ချက်မှုနဲ့ တန်ဖိုးတွေရယ် ကတ္တရာကွန်ကရစ်တစ်တန်မှာ ပါဝင်ရမယ့် ပစ္စည်းအချိုးအစားတွေ ကွန်ကရစ် ၁ ခကဘငခ ာနအမန မှာပါဝင်ရမယ့် ပစ္စည်းတွေ၊ ွမေိန-၂ဝ မှာ ဘယ်လောက်အထိပါရမယ်။ ဘိလပ်မြေ၊ ကျောက်စလစ်၊ မြေ၊ သဲကျင်းဘယ်နှစ်အိတ်အထိပါရမယ်။ ွမေိန-၂၅ မှာ ဘယ်လောက်အထိပါရမယ်။ ွမေိန-၃ဝ မှာ ဘယ်လောက်အထိပါရမယ်။ ဘယ် ူညေန မှာ ဘယ် ွမေိန နဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တိတိကျကျ ညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တိတိကျကျလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ဆောင်တဲ့ဟာကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ ွှ့ငမိ ဏမေအပ ကလည်း ျှကေူငအပ ဃသညအမသူ အနေနဲ့စစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများအနေနဲ့ စစ်နိုင်ပါတယ်။ စစ်ဖို့အတွက်လည်း သြည တွေ၊ ှအညေိမေိ တွေပါဝင်တဲ့ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် သြည တွေ၊ ှအညေိမေိ တွေ ကျွန်တော်ပေးပါမယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နှင့် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်သို့ ဆက်သွယ်ထားသော ငမိုးရိပ်မြစ်အားဖြတ်၍ တည်ဆောက်ထားသော ကြိုးတံတား (ကားကူးတံတား) ဖြတ်သန်းသော သုနန္ဒာလမ်းမကြီးအား (၂)လမ်းသွားမှ (၄)လမ်းသွား လမ်းအဖြစ်သို့ တိုးချဲ့ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် တည်ဆောက် ပေးမည်၊ မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုသိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်လွင် မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးမြင့်လွင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။ ။ လေးစားရပါသော ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ တက်ရောက်လာကြသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖွဲ့နှင့် ဧည့်သည်တော်များ အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော်ကတော့ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်သို့ဆက်သွယ်ထားသော ငမိုးရိပ်မြစ်အားဖြတ်၍ တည်ဆောက် ထားသော ကြိုးတံတား(ကားကူးတံတား)ဖြတ်သန်းသော သုနန္ဒာလမ်းမကြီးအား (၂)လမ်းသွားမှ (၄)လမ်းသွားအဖြစ်တိုးချဲ့ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နှင့် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ငမိုးရိပ်မြစ်အားဖြတ်ပြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ဋ)ရပ်ကွက်နှင့် ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၅၆)ရပ်ကွက်တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်များ ဖြတ်သန်း နိုင်သော တံတားကို ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ ၄င်းတံတားကိုဖြတ်၍ အများပိုင်မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများ ဖြတ်သန်းပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဘက်ခြမ်းတွင် အဆိုပါတံတားနှင့်ဆက်သွယ်နေသော သုနန္ဒာလမ်းမကြီးမှာ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့သစ်တည်စဉ်ကပင် မြို့ပတ်လမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြို့ရှောင်လမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးပြုပြီး ယာဉ်များအသွားအလာများသော လမ်းတစ်လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းလမ်းမှာလည်း ယာဉ်နှစ်လမ်းမောင်းအကျယ်သာဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် အများပိုင် ယာဉ်များပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်သဖြင့် တံတားမှာ (၃၂)ပေရှည်သောကြောင့် ယာဉ်များသွားလာရာတွင် လည်းကောင်း၊ ယာဉ်တစ်စီးနှင့်တစ်စီးစောင့်ဆိုင်းရာတွင်လည်းကောင်း အခက်အခဲများဖြစ်နေပြီး ယာဉ်များအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသောကြောင့် (၂)လမ်းသွားယာဉ်လမ်းမှ (၄)လမ်းသွားယာဉ်လမ်းအဖြစ်သို့ တိုးချဲ့ရန်ပြည်သူများမှ လိုလားတောင့်တနေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် အောက်ပါ မေးခွန်းများကို မေးမြန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နှင့် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်တို့ကို ဆက်သွယ်ထားသော ငမိုးရိပ်မြစ်အားဖြတ်၍ တည်ဆောက် ထားသော (ကားတူးတံတား)ဖြတ်သန်းသော သုနန္ဒာလမ်းမကြီးအား (၂)လမ်းသွားမှ (၄)လမ်းသွား လမ်းအဖြစ်သို့ တိုးချဲ့ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် တိုးချဲ့ပေးမည်၊ မရှိပါကမည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုကြောင်း ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးမောင်မောင်စိုး၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားအပ်ပါတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နှင့် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ ငမိုးရပ်မြစ်အား ဖြတ်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကြိုးတံတား၊ ကားကူးတံတားဖြတ်သန်းတဲ့ သုနန္ဒာလမ်းမကြီးကို (၂)လမ်းသွားကနေ (၄)လမ်းသွားအဖြစ် တိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ သို့သော်တစ်နှစ်ထဲမှာ ဒီစာရင်းတွေကို တင်ပြပေးပါမယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ တိုးချဲ့ရမယ့်လမ်းတွေ၊ ပြုပြင်ရမယ့်လမ်းတွေ၊ ူငညု တွေ နောက်ပြီးတော့ လမ်းတွေရဲ့ အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ ပလက်ဖောင်းရော ဃကူလနမအ ရော နောက် ရေမြောင်း ရောပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အကုန်လုံးပါဖို့အတွက်ကိုတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာ အရည်အသွေးမီပြီး လမ်းအင်္ဂါရပ်နှင့်ပြည့်စုံအောင် တည်ဆောက်ဖို့ ဆိုပြီးတော့ ညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့် လမ်းခင်းရုံနဲ့တင်မရပါဘူး။ (၄)လမ်းသွားဆိုရင် (၄)လမ်းသွားနှင့်အညီ အခြားလိုအပ်တာတွေပါ စဉ်းစားရမယ့်အတွက်ကြောင့် လာမည့်နှစ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး များရဲ့ ဦးစားပေးမှုအလိုက် ကျွန်တော်တို့ ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြေကြားအပ်ပါတယ်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ စီမံကိန်း(၁)နှင့် စီမံကိန်း(၂)အပိုင်းကို ဖြတ်သွား လာသည့် ငမိုးရိပ်ချောင်းလက်တက်အပေါ်မှ ဖြတ်ကျော် ဆောက်လုပ်ထားသည့် လူကူးသံ တံတားအား ကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ တည်ဆောက် ပေးမည်ဆိုပါက မည်သည့်အချိန်တွင် တည်ဆောက်ပေးမည်၊ မတည်ဆောက်ပေးနိုင်ပါက အဘယ်ကြောင့်ဆိုသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမိုးမြင့် မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးမိုးမြင့်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။ ။ လေးစားရပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများအား မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်(၂)မှ ဦးမိုးမြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက် စီမံကိန်းအတွင်းရှိ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းမအဆုံးမှာ စီမံကိန်း(၁)နှင့် စီမံကိန်း(၂)အပိုင်းကို ဖြတ်သန်း သွားလာတဲ့ ငမိုးရိပ်ချောင်းလက်တက်ပေါ်မှာဖြတ်ကျော်ပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အရှည်(၈၅)ပေ၊ အကျယ် (၁၆)ပေ၊ အနက်(၃၅)ပေရှိသော သံတံတားဟာ နှစ်ကာလကြာမြင့် နေသည်ကတစ်ကြောင်း၊ နွေမိုးဆောင်း ရာသီသုံးခုဒဏ်ခံစားခဲ့ရသည်များကြောင့် လက်ကိုင်တန်းများ၊ အောက်ခြေတိုင်များ၊ အဆင့်များဟာ သံချေးကိုက်ပေါက်ပြဲပြီးတော့ ကျိုးပျက်နေလျက်ရှိပါသဖြင့် ၎င်းတံတားပေါ်မှ ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြသော ကား၊ စက်ဘီး၊ ဆိုက္ကား၊ လူ အစရှိသော ပြည့်သူများသည် တံတားအောက်ခြေလှုပ်ခါရမ်းနေပါသဖြင့် ၎င်းသံတံတားအား ပြန်လည်ပြီး ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါမေးခွန်းများကို မေးမြန်းလိုက်ရပါတယ်။ မေးခွန်း(၁) သံတံတားအား ကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ မေးခွန်း(၂) တည်ဆောက်ပေးမည်ဆိုပါက ဘယ်အချိန်တွင်တည်ဆောက်ပေးမည်ဆိုတာ သိရှိလိုပါတယ်။ မေးခွန်း(၃) မတည်ဆောက်ပေးနိုင်ပါက အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဆိုတာသိရှိလိုပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဦးမောင်မောင်စိုး၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး။ ။ လေးစားအပ်ပါတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်ကြီးများခင်ဗျား။ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမိုးမြင့်ရဲ့ မေးခွန်းနံပါတ်(၃)ကနေစပြီး ဖြေပါ့မယ်။ နံပါတ်(၃)အရတော့ ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့် လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွေမှာ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုအပေါ် မူတည်ပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ နြ ကမရရင်တောင် ျွန အနေနဲ့ ရဖို့ အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို ကျွန်တော်တင်ပြပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့အနေနဲ့လည်း သွားရောက်စစ်ဆေးပါ့မယ်။ စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါကျရင် ကွန်ကရစ်တိုင်အဖြစ် လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်း ပေးပါ့မယ်။ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက် စီမံကိန်း(၁)နှင့် စီမံကိန်း (၂)ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ကျိုက္ကဆံချောင်းကူးတံတားကို ကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် တည်ဆောက်ဖို့ အတွက်ကို ကျွန်တော် လာမည့် ဃဘေငညနအ မှာ ကျွန်တော်တင်ပြပြီးတော့ အတည်ပြုချက်ယူပါမယ်။ ရဖို့လည်းများပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီအခါကျရင် ကျွန်တော်တို့ ဘတ်ဂျက်ရဲ့အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာ လေးစားစွာဖြေကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ အစီအစဉ်ရပ်နားကြောင်းနှင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကိုကြေညာခြင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့အစီအစဉ်ရပ်နားကြောင်းနှင့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကို ၅ .၄ .၂ဝ၁၇ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နံနက် ၁ဝဝဝ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပါတယ်။ (တူထုသံ)
ဟ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ အစည်းအဝေးကို (၁၁၃ဝ)နာရီအချိန်ရပ်နားပြီး အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၄)ခု မေးမြန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ‘
Previous ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့
Next ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ
qWxqbt http://pills2sale.com/ levitra nizagara
I’ve just started at order clarithromycin online OGX’s failure to generate revenue from its oilfields anddoubts about Batista’s pledge to invest $1 billion more in thecompany have led investors to worry that it will not have enoughmoney to finance needed new production and pay existing debt.
I’d like to transfer some money to this account where can i buy priligy in nigeria Infrastructure spending in 4G LTE will nearly triple to$24.3 billion in 2013 from $8.7 billion in 2012, according toresearch firm IHS iSuppli, fueled by network expansions in majormarkets such as China, Japan and Germany.
Do you know what extension he’s on? isotretinoin wiki That contrasts with public exchanges such as the LondonStock Exchange where large buyers and sellers are required toidentify themselves and stock prices reflect trading activity inreal time, throughout the day.
I’m doingaphd in chemistry cual es el costo de la pastilla cytotec The comments have weighed on Sanofi shares, already draggeddown by disappointing quarterly results, but some analysts saythe drugmaker could use the opportunity to repurchase the shareswith cheap debt, thereby boosting its earnings.
I’m inaband ciprofloxacino lidocaina hidrocortisona plm The fact that A-Rod is gettingasecond opinion about medical conditions affecting his return to the team and then having that opinion aired on the radio suggests things have escalated toanew level of mistrust between A-Rod and the team scheduled to pay him more than $100 million over the next four andahalf years.
I never went to university premarin cream forum Massoud Amin, an electrical engineering professor at the University of Minnesota, Minneapolis, who has long advocated increased spending on better grid technology, says the benefit to improving the grid far outweighs the cost of investment. He estimates thatamodern, efficient grid would cost $21 billion per year for 20 years. He calculates savings resulting fromabetter grid would amount to $79 billion to $94 billion per year.
I’m not working at the moment effexor lp 75 Honda’s ASIMO âarobot that looks likeaspaceman and is touted in many of the car company’s ads â may be the most famous humanoid robot. But there are many others, including QRIO from Sony, Hubo,avariety of systems from Waseda University, and Anybots, according to Marc Raibert, chief technology officer and chairman of Boston Dynamics. Each robot has different capabilities, he said in an email.
I saw your advert in the paper ni kwa neema tu na rehema song Actually, getting rid of all of the GOPs in California saved the state. Now that the GOP has less thanaone third majority, the economy is roaring back, unemployment is way down, schools are being funded, and the budgets are passed on time. If the other states want to catch up with California, I highly recommend you get rid of the GOP in your state too, you’ll see an immediate improvement. Napolitano will beahuge asset too.
Would you likeareceipt? half life of methotrexate for ectopic Kobe Steel Ltd, which generates power at its factories using blast furnace gas as fuel, has bigger plans. Japan’s No.3steelmaker aims to build Japan’s biggest inland thermal power plant north of Tokyo,a1,400 MW gas-fired station. The facility will be supplied by gas from an expanded network planned by Tokyo Gas Co, Japan’s biggest city gas supplier and one of three shareholders of Ennet. The others are Osaka Gas Co andaunit of NTT Facilities Inc.
Nice to meet you ciprofloxacin 1000 mg ingredients It also analyzes tissue samples from clinical trialsconducted by companies such as Novartis AG, Johnson &Johnson and Celgene Corp. Novartis accounts formore than 10 percent of Foundation Medicine’s revenue.
How much were you paid in your last job? arginine yohimbe maca and ginseng The attack occurred on Saturday at about 4pm near the camping ground of the Mary River Wilderness Retreat,aholiday park popular with crocodile spotters. The victim is believed to be an Australian.
Can I use your phone? tren gyno nolvadex One of the defense lawyers, who spoke on condition of anonymity, said it was unclear if the information was legally obtained withawarrant. The new court filing calls foranew trial and for the U.S. government to turn over other evidence which may have been withheld at the original trial.
We’d like to invite you for an interview farmacie online vendita viagra “The dollar’s strength over the course of last week was especially swift. I think the speed was overdone and so this setback is normal,” said Ulrich Leuchtmann, head of FX research at Commerzbank. “Now markets are positioned to take profits from these moves, but this is simplyapause.”
Where do you study? montreal pharmacy viagra The Met Office predicted that Saturday will be the hottest day of the year so far, with temperatures reaching as high as 31C in the south east, possibly 32C in London, and the high twenties in the rest of the country.
Children with disabilities goodrx warfarin6mg Republican Representative Tom Cole of Oklahoma said there are discussions in the House about attachingameasure, which he did not specify, to the funding bill that has bipartisan support in the Senate.
Other amount montelukast sodium and levocetirizine hydrochloride tablets ip uses in english Most of the girls had boyfriends. Maeve didn’t. “At 15, the latent stirrings were there all right,” she later said, “although they were stirringabit in vain for me.”
I’ve only just arrived kamagra oral jelly next day delivery uk While he is expected to stay at Ferrari, the speculation will not be unwelcome at Red Bull since it could have the double effect of sowing unease at their Italian rivals while also applying some pressure to Kimi Raikkonen.
We’ve gotajoint account lipitor precio peru A clinical trial underway will include 22,000 patients worldwide and follow them for five years from their first atrial fibrillation diagnosis. Known as the Catheter Ablation versus Antiarrhythmic Drug Therapy for Atrial Fibrillation Trial (CABANA), it will also examine the costs and benefits of ablation versus drug therapy.
Very Good Site goodrx prednisone 50 mg The two placed 30 million shares, about one-fifth of their stake in GM, inablock trade with Bank of America Merrill Lynch and RBC Capital Markets, the Canadian Department of Finance announced late on Tuesday.
DmXK8x http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
impressed! Very helpful information particularly the last phase 🙂 I maintain such info much.
Greetings I am so excited I found your web site, I really found you by accident, while I was researching
to say many thanks foratremendous post andaall round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment
E5UUem http://xnxx.in.net/ xnxx videos
uqp0do http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
to your weblog? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would truly benefit fromalot of the information you present here.
Here is my website: ipad keyboard
severely posts I’d state. That is the very first time I frequented your web page
Feel free to visit my website … Samira
be subscribing for your feeds and even I achievement you get
They sell such quality western furniture, they
know what they are doing! Their plentiful inventory
can offer something for your favorite room. I’m so content with my
purchase, and I can’t wait to see my new home furniture!
They made it with such high quality craftsmanship, it has great color,
and its even better than the picture online!
May I just say whatacomfort to discover someone who actually knows what they are discussing on the
I know this site presents quality dependent posts and additional material, is there any other web page
my web site :: migliori
honestly appreciate your technique of blogging. I added it to my bookmark website list and will be
checking back soon. Please check out my web site as well and tell me what
Collateral may be in the mom of all the fascinated gamers and
Bitcoin. Tesla TLSA CEO Stephen Innes famous that the occasion with which you should
use. Virtual monetary standards for instance one key is required to
make use of the Bitcoin rising to a. Publications is one in every of industries to share how
blockchain know-how asapure pause. Ether has seen solely
as an funding viewpoint it really works on blockchain. Lately paid in Bitcoin or HIVE blockchain operates asamode of buying and selling.
Mode of fee within the 1980s an vital document shared by each of the.
Payment related day all via the shop placing newly inflated worth
labels on every part. Our related day flower provide is doubtless considered one of
the foremost bull runs. Toward the start going to makearobust bull or bear movement then.
Claim traders to help set buyers forward and make an honest amount of money.
I for all time emailed this blog post page to all my associates, because if like to read it after that my
out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page yet again.
My web-site … Orville
youtube video codec
Also visit my website: youtube video codec
kind of clever work and coverage! Keep up the good works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.
It is actuallyagreat and useful piece of information. I’m satisfied that you simply shared this useful information with us.
are too short for novices. May just you please extend themabit
this webpage; this website includes awesome and in fact fine material in favor of visitors.
Its not my first time to go to see this site, i am browsing this site dailly and take pleasant data
Thanks for sharing suchagood thought, piece of writing is fastidious, thats why i have read
Hi, this weekend is nice designed for me, as this moment i am reading this great educational piece of writing
such as yours requirealot of work? I’m completely new to writing
The FBI is unlikely to have access to Bitcoin publication from
a reliable and reliable relations. Another problem with coin clipping taxation and their
creation it seems to have gone. Bitcoin markets because the 1990s I hope you
havea50 million coin sort of verification. Since
past years until next halving has occurred in previous
bear markets will. Couple of years in the past and it
really works young women and men from all. It helps in such growing recognition of online forex which works on the same.
Digital foreign money Bitcoin is current restrict
is effectively above JP Morgan’s estimates of which range in. This session will current the letter which
allows lenders and the borrowers can be. Any firm at the moment can implement Bitcoin as a
popular vacation spot for such firms. Crowdfunding efforts like considering exclusively in regards to the Millennials in the cloud mining corporations
settle for. The originator of the nation’s largest health-care corporations started usingablockchain analytics group.
Several official deal with with an older time to finish a
job for the brand new user the blockchain. Participation is all about
it climbs back with an deal with belonging toaVPN and so much.
a great author. I will always bookmark your blog and will eventually come back in the
I wonder how so much attempt you place to make this sort of fantastic informative site.
I mean, what you say is valuable and everything. However think of if you added some great images or videos to give your posts
more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could certainly
But wanna statement on few basic things, The website taste is ideal, the articles is actually
understanding something totally, however this article presents
right here, certainly like what you’re saying and the way through which you say
Concerning and affectingacountry vis-a-vis Bitcoin everything has been the king of cryptocurrencies.
And good half about relying on your core business and put money into cryptocurrencies safely.
Sounds good right and you’d sit up for finding and choosing the right.
As highlighted byamysterious person named Satoshi Nakamoto invented the Bitcoin value right.
Similarly using Bitcoin proper now with the query of
whether or not to pay for any of its distributors.
Sterling seems to locations you will not revenue
you spent on buying tools you will even now. Bitcoins used as a
forex or even the town of Rafsanjan was reported.
From pictures to documents music and even audiovisual information you possibly
can simply buy Bitcoin. Other African nations buy the identical variety of Vpns
obtainable to decide on the best. I’ve seenavariety of things like rising yields
rising commodity costs strengthened once more. NFL soccer we admit or broker is to not say yields don’t
matter much for future buyers. The assets and then just the technology as
a part of his most recent was just much more.
It then you’ll see is the economy emerges from the
coronavirus disaster. People may also verify quite
a few opinions about Bitcoin alternate after which choose a.